Tadiom-pitiavana | 15
Niezaka mafy i Hery hitadidy ny anarany, fantany tsara mantsy, fa ilay naman’i Malala nivarotra fanafody taminy tamin’ny alina teo no manoloana azy.
- "Fa angaha ianao tsy manao « garde », sa izao vao andeha hiasa?"
- "Manao ahoana aloha i Hery e!" sady natolony ny tanany hiarahaba.
- "Manao ahoana ianao? Tany amin’i Malala ihany ve ianao androany, dia nanao ahoana izy sy ny zazakely izay?"
- "Tany amin’i Malala tokoa aho tamin’ny maraina dia io hariva io koa; ary efa tena mihatsara izy fa aza matahotra ianao. Nahazo fialan-tsasatra kely aho anio tontolo andro dia rahampitso maraina indray no miditra miasa."
- "Tsara izany," hoy i Hery sady nisento kely izy ; toa azo resahina tsara ity vehivavy ity izany, tsy nisy nahodiny mihitsy ny fanontaniako, tsy maintsy fantatro eto androany izay nolazain’i Malala tamin’ity sipa ity momba ny fiainanko sy izay hadalako nataoko hatrizay. Tena tsy matiko lolo mihitsy mantsy ny nahafantarany ny anarako ; misy zavatra ao.
- "Hisakafo ato angaha ianao?" hoy ihany i Hery.
- "Eny tokoa ! saika hisakafo irery aho kanjo nahita anao dia nanatona. Tsy aleo ve miaraka misakafo e! Dia mba miresadresaka koa fa tahaka ny fohy loatra ilay omaly alina."
Mahamahana ihany i Hery. Kanefa ny trangan-javatra tsy misy tahaka izao, nanaiky mihitsy izy, dia nilaza tamin’ilay serveuse fa tsy ho fonosina entina mody indray ny safako vao nafarany teo fa hohaniny eo ihany. Dia nanafatra ny sakafo tiany koa ilay vehivavy. Tena tsy niverina tao an-tsainy mihitsy ny anaran’ilay vehivavy ka nibaboka ny anao lahy hoe :
- "tena tsy tadidiko mihitsy ilay anaranao fa iza moa? azafady indrindra."
- "Tsss ! tena tsy tadidinao ve, menatra be aho izao hilaza : Tahiana hoy izy!"
- "Azafady Mademoiselle Tahiana fa tena hadinoko tokoa."
- "Aza antsoinao Mademoiselle izany aho fa tsy tiako ka ! Antsoy hoe : Tahiana fotsiny aho dia ampy izay."
Marina tokoa ny azy. Raha olona niray dabilio tamin’i Malala izany dia tokony hitovitovy taona aminy, izany hoe : eo amin’ny 37 eo ho eo, fa mbola azo lazaina hoe : mitàna aloha e ! misy ahareseny an’i Malala tokoa ; asa mety mbola tsy manan-janaka koa angamba ; nefa hita ihany hoe manakaiky tokoa ny faha-efapolo taona.
Dia niara-nisakafo teo i Tahiana sy Hery. Nitantara ny fahasalaman’i Malala hatramin’izay. Nitantara ny fiainan’izy roa tany aloha tany. Ny asa ataony amin’izao izy miandry raharaha izao. Fa toa tsy voalaza mazava mihitsy izay notantarain’i Malala mikasika ny nataon’i Hery antsokosoko efa ho telo taona mahery izao. Tsy mampandry ny sain’i Hery mihitsy hoe : nahoana marina no mahatonga ity vehivavy ity mahafantatra be loatra ny momba azy. Tena havanana amin’ny fampiresahana aloha ity Tahiana ity e !
Vita ny sakafo dia niara-nandeha hody izy ireo; dia mahagaga tokoa fa mitovy lalana hodiana. Naleon’izy ireo niaraka nandray fiarakaretsaka. Nitohy ihany ny resaka.
- "Tsy aleo ve mba tohizana ato an-trano fa mahaliana be ny miresaka aminao. Te hahalala misimisy kokoa ny momba anao aho," hoy i Hery mody manatsafa, fa ny tena tanjony dia ny hanapotsitra mafy ny resaka mba hivoahan’ny marina.
Tsy nisalasala mihitsy i Tahiana nanaiky, asa koa izay notadiaviny.
Nampandrosoin’i Hery rehefa novoahainy ny trano.
-"Angaha ianao irery no ato?" hoy indray i Tahiana.
- "Marina izany, izaho irery aloha no ato fa lasa tamin’ny maraina teo ny ray amandrenibe-ko."
- "Tsara kosa izany ! Manana fahalalahana tsara ianao amin’izao ! Mahafinaritra anie izany hoe mahazo manao izay tianao hatao sady tsy misy mibedy izany eh."
- "Mahazo manao izay tiako hatao tahaka ny hoe mitondra an’i Malala aty ve? sa koa mitondra anao samirery tahaka izao ataoko izao dia avy eo…"
Nojeren’i Tahiana tsara i Hery dia niverina nitsiky indray izy sady somary latsaka hehy.
- "Izy roa mitambatra, mampaninona moa e !!!!!"
Gagagaga be i Hery tamin'ny valinteny azony.
- "Ianao ity koa tsss, aleo aho aloha hikarakara ravim-boafotsy sy mofomamy harosoko anao." Sady lasa ihany i Hery nankany an-dakozia.
I Tahiana amin’io variana mijery izay hoso-doko mirenty amin’ny rindrina, sy izay sary teny ambony latabatra teny. Niverina avy eo i Hery tonga dia niteny.
- "Tena tsy azoko mihitsy ry Tahiana ny hoe ahoana ny ahalalanao ny anarako sy izay momba ahy? Efa hatramin’ny omaly izay no fanontaniana nipetraka tamiko ka mba tiako hazava. Inona avy no notantarain’i Malala anao fa manjary mampikorontana ny saiko fotsiny ny fisianao."
Tsy niteny mihitsy i Tahiana fa nobanjininy tsara i Hery sady nanatona azy ihany izy. Notazominy teo amin’ny sandriny roa aloha i Hery dia nalefany ny indray ny tanany hisafo ny tratrany ary hamonjy ny vozon’akanjony izay mody namboariny teo.
- "Dia tsy azonao an-tsaina mihitsy ve?" hoy ihany izy, sady nanakatra moramora ny molotr’i Hery izy, ny tanany lasa nisarika ny hatoka sady mangeja an-kolaka ity tovolahy bikana sady tsara tarehy.
Nifanoroka efa ho folo segondra teo izy roa. Tsy hitan’i Hery izay natao. Ity iray vao mainka namihina mafy ka tsapany ny lanjan’ireo nono roa mitohoka teo amin’ny vatany. Tahaka ireny ondana malemy dia malemy tsara fono ireny ka manonja raha vao kitihina. Nijanona tampoka izy sady toa tonga saina amin'ity zavatra ataony. I Tahiana amin'io toa tsy nanaiky fa vao maika nisarika indray ny lohan’i Hery hanatona azy. Tsy nahatohitra ny lehilahy dia nitohy indray ny orokoroka, ny lelan'izy roa amin’io mifampitady mafy te hifandray am-pitiavana. Tsy nahaleo intsony i Hery fa tonga dia nanafosafo ny lamosin’i Tahiana, nikaroka ny vodi-lamba hampidirany ny tanany hamonjy ny faritra mafana any anaty akanjo any. Ny oroka amin’io tsy misy fitsaharany. Ny tanany koa moa efa zatra mamaha tsy ankasarotana ny faraingoka amin’ny tadi-nono ka poa toy izay dia tsy nisy sakantsakana intsony izay tian'ny tananay haleha. Safosafo izao, tahaka ny tsy teo ny nanalàn’i Tahiana ny akanjo ambony somary mifintina manara-batana hahamora ny fanalàna ity tati-nono teny ankodiny.
Hatsaran-tarehina nono izany. Naleon’i Hery aloha somary niondrika hitsapàn’ny takolany ny hafanan’ireto nono roa nanoloana azy. Norokorohany teo ka nampiakatra ny onjam-pahasambarana tany anatin’i Tahiana tany. Ity farany tonga dia nisarika indray ny lohan’i Hery hanoroka azy sady nanala ilay lobaka mba hampifangaro ny hafanan’ny vatan’izy roa. Ny safosafo amin’io nitohy tsy ankijanona toa mikaroka mafy izay onjam-pasahambarana hoan'izy roa.
Tampotampoka teo, tonga dia nobatain’i Hery hipetraka teo amin’ny seza lava I Tahiana. Novahany ilay fehikibo lamba sy ny bokotra dia nosintosintoniny teo ny pataloha jean’s manara-batana izay avy hatrany koa dia nanala ny kiraro teny an-tongotr’i Tahiana. Hatsaran-batan'olona izany hoy izy tany antsainy tany. I Tahiana amin’io manafosafo ny faritra mahavehivavy azy izay efa tsapany fa mando saroman’ny string maintimainty mbola teny aminy. Tsy nihetsika intsony i Hery nony avy eo fa niandry fotsiny izay hataon’i Tahiana manaraka. Tsy nisy niteny, tsy nisy nivolana izy roa fa i Tahiana no tonga dia namaha avy hatrany izay teny amin'i Hery. Tsy nisalasala izy fa naborotsany avokoa izay akanjo sisa tavela teny aminy. Ny maha-lehilahy azy amin’io mihenjana mafy tsy nisy ohatran'izany. Niala vetivety i Hery ary noraisiny ny tanan’i Tahiana ilany, dia nosarihiny hitsangana. Notaritarihin’i Hery izy hiakatra tsimoramora tany ambony, ary navelan’izy ireo teo amin’ny fandraisam-bahiny ny akanjony. I Tahiana amin’io string kely sisa no teny an-kodiny. Tonga dia nampidirin’i Hery tao amin’ny efitra fandroana dia nitohy indray ny safosafo sy ny orokoroka samihafa manenika ny vatan’izy roa. Nalefan’i Hery tampoka ny rano ka saika nitsamboatra i Tahiana niantsampy teny aminy sady nikiakiaka kely, nefa vao mainka nampifikitra mafy tamin’ity akaiky azy izany. Tsy naharitra intsony ny anao vavy fa nanala ilay string. Niteny tampoka I Hery hoe: " Andraso kely aloha fa haka zavatra vetivety aho." Sady lasa nivoaka ny efitrano fandroana izy. Ny rano amin'io mifatsitsitra moramora manaraka ny vatan’i Tahiana, mahafinaritra ery ny mijery ny nonony irarahan’ny rano tahaka ireny tendrombohitra ivoahan’ny loharano ireny, sady safosafoiny ihany. Tsy andriny izay hiverenan'i Hery teo anilany. Iny tokoa ny lehilahy nitondra fimailo avy any. Novahany dia natolony an’i Tahiana izay tsy nisalasala nampiditra azy.
Tsy ela taorian'izay dia tavela tao anatin'ny firaisana ara-nofo tanteraka izy roa ka tsy nahoany akory ny rano mandeha mikoriana nifafy tamin'ny vatany sy ny hatsiaky ny taila fotsy manemitra ny efitra izay niankinan'izy roa nifandimby. Satrin’i Hery foana hampitohaka ny tarehiny ao anatin’ireto nono tsara bika toa tendrombohitra tsy manam-paharoa. Tsy nitsahatra izy ireo raha tsy samy tojo tamin'ny faratampo-pahafinaretan'ny nofony avy. Rehefa vita izay dia nivoaka ny efitrano fandroana izy ireo. I Tahiana amin’io feno tsikitsik toy ny nahitan'i Hery azy tamin'ny voalohany ihany.
Niverina nidina izy ireo namonjy ny efitra fandraisam-bahiny, tsy nisy nifampiteny fa niara-nipetraka teo amin’ny seza lava, dia samy nampiditra ny ankajony. Vita izany dia nampofoin’i Hery i Tahiana sady nanomboka ny resaka.
- "Tsy diso mihitsy i Malala milaza fa « étalon » mihitsy kay ianao ity. Tena lafatra, mbola tsy nanao tahaka izay aho fa hafa mihitsy aloha iny hevitrao tany anaty fandroana iny e!" sady nanoroka indray an’i Hery izy.
- "Te hitsapa ilay sensation an’i Malala nanana fisakaizana taminao fotsiny aho."
- "Fa inona marina no nambaran’i Malala anao e!" hoy indray i Hery somary tezitra. Niondana i Tahiana dia niteny hoe :
- "Efa fantatro daholo ny momba anao rehetra, fa ianao fotsiny no sisa mbola tsy hitako. Izaho koa tonga dia babo avy hatrany raha vao nahita anao. Tiako ho fantatrao fotsiny fa valifaty ataoko amin’i Malala izao, ary efa elabe mihitsy no nandrasako izany. Efa nisy sipako izay mantsy taloha, bandy milay izany fa dia nangalarin’i Malala, tezitra be aho tamin’izay an ! dia mba anjarako indray izao ny mamaly izay nataony tamiko. Fa aza matahotra ianao e ! Tsy hiditra amin’izay olana mianajady aminao mihitsy aho fa mba te hanana aventure kely fotsiny ! Sa tianao ny miaraka amiko?"
- "Tsss !" sady tsy niteny intsony i Hery no nalahelo kely ihany nandre izany. Amin’ny lafiny iray, nanenina izy noho ity Malala izay neveriny ho azo itokisana amin’ny nataon’izy roa, nefa hay mamboraka ny tsiambaratelo amin’izao olona tsy fantany izao akory. Amin’ny lafiny faharoa kosa, ny tenin’i Tahiana izay mandratra azy noho ity izy toa andrakandraman'ny olona fotsiny. Ary ny lafiny fahatelo dia izy tsy naharitra ela akory dia efa nivadika tamin’ny toky nomeny an’i Alexia vao omaly harivan’io.
Tena ditran’olona marina letsy ny an’ialahy ry Hery, sady nanongo tena izy.
Nitsangana avy eo i Tahiana dia niteny hoe :
- "Aleo aho handeha fa efa miha-alina ny andro ; tsy aleo ve mba aterinao kely vetivety."
- "Tsy maninona," hoy izy, "aleo mihitsy ianao ateriko eny amin’ny arabe ka rehefa mahita fiarakaretsaka vao miverina aho."
- "Misaotra fa tena nahafinaritra ahy mihitsy ianao. Mbola mifankahita foana isika an! aza atao mahakivy anao mihitsy ny fihetsiko fa mba mila ny tahaka ireny nataontsika teo ireny aho indraindray. Tena marina anie izany fa tena milay ilay teo e!"
Tsy novalian’i Hery intsony ny resaka fa ny handehanan’ity Tahiana ity no mahamaika azy. Efa azony koa moa izay nilainy tsy ampy azy ve izay ; ilay ravim-boafotsy rahateo efa nangatsiaka tsy nisy nikitika akory.
Nony niverina tao an-trano izy dia niakatra hamafa ny efitra fandroana, hay najanon’i Tahiana iny tao ilay string maintimainty mbola hotsaky ny rano.
Ahoana indray ary ny hanaovako ity. Tsss !
Noraisin'i Hery ilay izy mbola tena lena be iny dia niasa saina teo izy na hariany na hafeniny. Raha hafenina amin'ity izy mbola lena be ity anefa hoy izy tany antsainy tany mety hasiso any ity. Tsy hitany izay hatao fa nahantony tamin’ny tady fanamainana ilay izy no niafarany.
Nidina tany ambany izy avy eo nikarakara izay sakafo kely mbola azony nohanina fa nahatsiaro noana indray. Vita ny sakafo dia nijery fahitalavitra hanaraka horonan-tsarimihetsika tany amin’ny efitranony. Ny ampitso maraina vao taitra hamonjy indray ny asa.
Tonga tany am-piasana i Hery, nahatsiarotsiaro an’i Alexia, te-hiantso mafy ka nandray ny findainy, nantsoiny ary avy hatrany dia nahazo ; tampoka teo anefa tapaka indray. Aza hitako, hoy i Hery, mety niantso ahy foana i Alexia fa tsy nahazo mihitsy ; tena tsy afaka namelona ity finday ity mihitsy aho hatramin’ny omaly. Dia maninona ary raha nantsoiny tato am-piasàna? Aza hitako ka tsy te-hiresaka amiko intsony izy.
Tsy nihevitra ny momba izay resaka izay intsony i Hery, fa manjary hanenina eo indray ny amin’ity nataony omaly hariva. Henjana kosa aloha ilay nataon’i Tahiana e ! Amin’izao, na handalo eo amin’io farmasia io aza rehefa mody toa misalasala ihany. Ny nenina marina hoy izy tsy ao aloha hananatra, fa aoriana handatsa.
Notohizany ny asany. Nony tonga ny atoandro dia nojereny ilay tranon-kala novangiany omaly. Nosokafany ilay lohahevitra noforoniny. Efa ho 35 ny valin-teny tao ; saika isaky ny 30 minitra dia misy mamaly foana. Valin-teny izany, ao ny tonga dia manome tsiny avy hatrany, ao ny manolo-kevitra ny hoe : ndàna mitsoaka ny tany misy anao izao fa hahavanon-doza eo indray, ny teny amin’io vary amin’anana tsy ifankahazoana. Ao koa ny manolotra sahady izay mety ho tohin’ny fiainako amin’ny alalan’ny tantara. Lava izany valim-panontaniana izany, tsy nampoiziny ho tahaka izao mihitsy. Asa tokoa, fa hafa nohon’ny hafa angamba ity ditra nataoko ity hoy izy. Tsy nisy vonoan’olona akory, satria hafa ny heloka izay mampigadra, fa ity fahotana mampigatra ara-tsaina amam-panahy no mihatra aminy.
Tapitra vinakiny avy eo ilay takila noforoniny dia nisento tokana izy. Toa tsy ahitako vahaolana akory izy izany fa fanomezan-tsiny ny be dia be.
- Ataoko ahoana tokoa moa ny handao ny asako sy izy efa-mianaka, ireo no fiainako na dia manahirana ahy aza. Tsy maintsy mitraka fa lehilahy.
Nosokafany ihany koa ny mailaka dia nisy hafatra tao ny momba ilay fotoana amin’ny zoma hariva. Faly ery ry zalahy izany, hisy revy be izany ao an-trano. Aleo marina manala azy fa mila tsy ho tanty intsony raha izao foana no iainana, sady faran’ny volana rahateo moa ny andro tamin'io. Nandefa mailaka tany amin’i Alexia izy avy eo, hafatra mitory fitiavana fa tsy manadino azy akory i Hery.
Teo vao tadidiny fa hay moa namorona mailaka vaovao izy omaly, izay nataony hoe : kelimaditra@yahoo.fr mba ahafahany mifandray amin’izay olona te-hifampitafa aminy momba io lohahevitra nosokafany io. Nojereny izay tao.
« Bienvenu Kelimaditra »
Vous avez 1 nouveau(x) message(s).
Nosokafany indray. Mbola tsy fantany mihitsy ilay adiresy. Mazava koa ange fa tsy hisy olona hanome izay tena anarany akory raha ny amin’ny fifandraisana tahaka izao e! Notohizany nidirana ka izao no soratra tahaka tao :
Slt à toi Kelimaditra !
Nahita ny forum nataonao aho ka mba hanoro hevitra fa mety hisy vahaolana ihany omeko anao. Koa raha sitrakao indrindra dia hifanoratra isika.
Mianatra manokana momba ny sociologie eny Ankatso aho ary manomana maitrise ka mba te-hahafantatra izay manjo anao, ary afaka mihitsy koa manoro hevitra amin’izay tokony hataonao.
Manantena valiny avy aminao.>>>
Tsss ! sociologie, inona koa no hifandraisan’izany. Manomana maitrise, mpianatra eny ankatso izany, hafa dia hafa tokoa aloha ny fiainana atrehin’ialahy ry Hery ka izay angamba no ilàny an’ialahy. Kanefa izy moa nilaza fa misy vahaolana azony atolotra. Mety efa niainany koa angamba izany e ! aleo valiana amin’ny manaraka fa tsy izao aloha. Tsy fantatro akory na lehilahy na vehivavy izao manoratra izao.
Nofaranany avokoa ny asany teo ambodin’ny solosaina dia nivoaka izy hisakafo atoandro.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (0) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Lasa nirifatra i Ratrema, nandeha mafy aok’izany. Tezitra ny anao lahy, be loatra ny hambom-pony. Tendrim-po tsy mba namana tokoa, ka naleony aloha niala izao trangan-javatra mety hanahirana azy izao. Fantany tsara tokoa ny fahadisoana nataony, ary azony tsara ny mahatonga izao zavatra rehetra miseho izao. Nijanona vetivety teny amin’ny sisin-dalana izy, noraisiny ny finday ; nantsoiny i Corine :
- "Allo ! Aiza ianao io izao? "
- "Fa misy inona ?" hoy ny feon’i Corine tao anaty finday.
- " Mety ho afaka mifankahita ve isika izao fa tena henjana ny raharaha."
- "Ianao ve Ratrema adala sa mody fanina an ! Amin’ity andro efa alina be, tsy fantatrao angaha fa manambady aho. Zaranao aza tsy eto akaikiko eto izy fa tsy noraisiko akory ianao raha tsy izany."
- "Tratran’i Malala ilay nataontsika aninkeo."
- "Tsy problemako izay tratra any fa anao izany," sady notapahin’i Corine ny antsony.
Vao mainka romotra I Ratrema, naviliny lalana ny fiarany dia nankany am-piasàny izy. Eken’ny sainy tokoa ny fahadisoany fa ity Hery misolantsolana miditra amin’ny fiainan-tokantranony no tena mampirehitra ny fahatezerany.
Na izaho, na ilay Herin-doza iny, hoy Ratrema tany an-tsainy, fa tsy ifandrombonana mihitsy ny mitondra ny fiainan-tokantranoko. Nandefitra sy honena an’ialahy aho hatrizay, fa ho hitan’ialahy amin’izay izay tsy mbola niainan’ialahy.
Tany an-trano anefa, sahiran-tsaina aok’izany ny rehetra tao, ny fanafody mbola tsy nisy voavidy, Malala mbola vizana dia vizana tsy mahateny fa ny ranomasony no mijohy amin’ny tarehiny, izy mianadahy kely tsy mitsahatra ny mitomany. I Alexia tsy antenaina fa latsa-dranomaso mahita an’ity reniny. Ilay taratasy kely amin'io mbola teny an-tanany ihany.
Nidina i Hery nitady ireo taratasim-panafody, mbola teo ambony latabatra lehibe. Noraisiny dia niakatra izy.
- "Tsy maintsy vidiana haingana ireto fanafody ireto," hoy izy. " Aleo aho omena lakilen’ny fiara iray dia handeha hividy ireto." Nampahereziny teo i Alexia sady nampangininy fa tsy maintsy handeha vetivety izy.
- "Andraso tsara eo aloha i Malala fa tsy maintsy mila anao izy amin’izao tsy salama izao."
_ "Tena loza ny nafitsok’i Ratrema, lehilahy loham-pianakaviana ve no sahy handao ny vady aman-janany marary nefa ny andro alina ? Tsy mety izany," hoy izy. "Na inona tendrom-po, na inona fahatezerana, ny tokantrano tsy azo avela indrindra amin’ny fotoana tahaka izao. Izaho aza mbola tsy manam-bady mahatsapa izany, koa lehilahy lehibe tahaka iny ve?"
Nomen’i Alexia azy ny fanalahidin’ny fiara dia lasa i Hery. Nasainy niaraka taminy ny mpiambina ny tanàna iray dia novelominy ny fiara ary nivoaka ny vavahady izy nandeha hitady ny fivarotam-panafody miandry raharaha. Teny an-dalana vao tsaroany fa tokony haka vola, naviliny lalana tampoka ny fiara handalo ireny fakana vola mampiasa karatra ireny. Rehefa azony izay nilainy dia nihazo izay farmasia akaiky azy indrindra teo izy.
Teo vao tsapany izany hoe mandray andraikitra eo anivon’ny ankohonana izany, izao tokoa moa izany no mitranga rehefa misy marary ny ao an-trano, ary tena mahatsiaro sahirana tokoa rehefa ny vady aman-janaka no iharany.
Vady aman-janaka.. iza moa letsy no itotototoan’ialahy toy izao fa tsy ny zanak’ialahy, dia ny reniny. Toa fanaintainana hafa fa tsy tahaka ny tamin’izy nitsabo an-dReniny taloha no tsapany. Ireto hay moa hoy izy no tena silaky ny aiko.
Raha tsy naditra tokoa letsy ialahy ry Hery, dia tsy nisy mihitsy ny tahaka izao. Lasa tsy hiverina intsony ireny, nefa mamela takaitra tsy mety afaka eo amin’ny tarehin’ialahy ; ary isaky ny misy zavatra mitranga dia ren’ialahy mangirifiry foana, ary mbola miboba-rà aza indraindray.
Verivery saina teo i Hery, varimbariana, vizana sady torovana. Ilay mpivarotra nanontany raha mila faktiora izy no nanaitra sy nahatonga saina azy.
- "Ramose an, asiana faktiora ve?"
- "Ann ! fa ahoana tokoa moa ? Tsy tokony hasiana ve?"
- "Gaga aho mantsy raha tsy asiana, fantatro tsara anie i Mme Malalatiana e !" Niara-nianatra izahay taloha, ary iray dabilio mihitsy, isaky ny mividy fanafody izy dia manketo amiko foana, dia miresaka izahay. Mahita ireto lisitra ireto aho, angaha tena marary be i Malala sy ny zazakely ? Fa ianao moa no iza raha tsy mahadiso?
Kaodikaody i Hery.
- " Niara-nianatra taminy ianao ? Euuh, (tsy hitan’i Hery izay hotenenina), fofombadin’i Alexia aho ka!"
- "Hay ! Hay ianao izany ilay Hery, firesany matetika mihitsy ianao. Ary tena hay mbola bôgôsy kosa kay ianao noho ilay nolazainy ahy," sady nitsikitsiky be izy.
Fa inona indray ary no nolazain’i Malala tamin’ity Ramatoa ity, aza hitako ka fantany avokoa ny momba ahy iray manontolo. Ilay vehivavy amin’io mitsikitsiky ihany. Asa izay ao an-tsainy.
Nataony ny faktiora rehetra, dia nomeny ny fanafody rehefa avy nandoa vola i Hery;
- "Mirary fahasalamana an’i Malala, rahampitso maraina aho, rehefa vita ny garde, dia mandalo any aminy any. Mampamangy e!"
- "Misaotra tompoko," hoy i Hery, "Mme iza moa raha tsy mahadiso?"
- "Mademoiselle ka, Mlle Tahiana, faly mahafantatra an’i Hery." Sady natolony ny tanany ho mariky ny fifankafantarana.
Sadaikatra be i Hery nivoaka ilay farmasia. Kivy be ihany izy fa tena fantatr’ilay vehivavy teo hatramin’ny anarany. Loza koa ity vava tsy ambina ataon’i Malala. Raha izao ve tsy tsara tatitra avokoa izay nataoko rehetra hatrizay. Loza miampy loza angamba.
Nodiany tsy noraharahiana izay zavatra nitranga teo fa ireto marary itondrany ny fanafody no nohezahiny nabahana ny sainy.
Raha izao moa Ratrema no niverina, ary mety izany mihitsy no ao an-trano ao, asa angamba izay hitranga ; aleo izany tsy hirariana fa hisy hifamono ho faty eo angamba.
Eny an-dalana izy tsy miteny mihitsy, ilay mpiambina nanaraka azy amin’io mangitikitika sy te-hanontany izay nitranga. Tsy naharitra intsony ity farany ka niteny sady somary nivazivazy.
- "Ramose an ! Tena misy inona marina ao fa Ingahy Rainy be lasa nirifatra aok’izany nefa izao isika avy nividy fanafody."
- "Sshhhh ! ho fantatrareo eo ihany ny tohiny, marary fotsiny i Madama ao, ny zazakely an-tanana ihany koa. Aza dia asiana resaka be fa manjary manahirana."
Tonga izy mirahalahy, vao nijanona ny fiara dia nivoaka ilay mpiambina namoa ny vavahady.
- "Jereo aloha ilay 4x4 an’Ingahy Rainy teo raha efa tafaverina ao!"
- " Tsy mbola ao kah!"
- " Voahay tsara ary ny vavahady dia aleo aho hiditra."
Niakatra tany amin’ny efitr’i Malala i Hery, nojereny, hay efa matory. I Alexia lasa nidina any ambany nikarakara izay ranon-dravim-boafotsy fanampiny homena ity marary. Noraisin’i Hery moramora ny tanany. Ny ilany mitazona ny taratasim-panafody milaza izay tokony hatao. Navoakany tsirairay izay fanafody tao anaty harona, dia natokatokany teo ; tsy maintsy hofohazina ve izany i Malala hanomezana ireto? Hoy izy niteny irery.
Niditra i Alexia :
- "Hery, hay efa tato ianao ? Efa nihafana ny hafanany, nomeko ravim-boafotsy mafana izy dia nitonitony rehefa avy tsemboka be, nasiako tavoahangy misy rano mafana koa tany amin’ny tongony dia izy io natory io;"
- "Ary i Cynthia ? Nanao ahoana izy izay ?"
- "Hay efa nomen’ilay dokotera fanafody izy fa soloina fotsiny rahampitso rehefa tonga eo. Dia nomena azy izay tokony hohaniny. Efa matory ihany koa."
- "Ouff ! izay vao milamina ny saiko."
- "Ity bandikely ity no tsy mety matory fa variana milalao, i Toky amin’io nanaraka an’i Alexia nandady niakatra ny tohatra ; Faly ery vao nahita an’i Hery sady nihazakazaka kely ery niantsampy teny aminy."
- "Ahoana ny ataontsika ry Alex ? Tsy niverina mihitsy ve ny Papanao. Aleo aho handeha amin’izay fa tsy maintsy hiverina eo izy, asa indray angamba izay hitranga."
- Aza mirohirohy saina ianao fa efa niantso azy aho. Mbola tsy hiverina hono izy aloha fa aleony mijanona any am-piasany ihany ; misy efitra kely fakàny aina koa ange any e ! mangotraka be ny fony ka aleony aloha mampitony tsara izany vao miverina aty;"
- "Ka na teo aza izy, izaho koa tsy hamela anao handeha mihitsy. Jereo ange ity mahazo anay e!" sady nanafosafo ny lohan’i Hery ihany izy.
- "Andao aloha hisakafo fa hitako mihitsy hoe : tsy mbola nanendry hanina izao ialahy ity hatramin’ny avy any Ambatofotsy."
I Toky amin’izay efa miha-mavesatra ny maso keliny te hatory, dia nampandrian’izy roa tao amin’ny efitranony. Niara-nidina izy ireo, norosoan’i Alexia trondro izy ka ninosanosana ery. Vao vita ny sakafo dia nitsangana i Hery, nanoroka ity malalany sady nisaotra.
Injay fa re misokatra ny vavahady lehibe, mitaratra miditra any an-trano ny jiron’ny fiara. Fiaran-dRatrema io, tsy isalasalàna mihitsy.
Tampoka, misy mikiakiaka any ambony, i Malala izay, misy zavatra nitontona mafy sady mikodiadia amin’ny gorodona .
Nihazakaza i Hery niakatra ny tohatra...........inona indray no zavatra hiseho ?
Nihazakazaka tahaka ny tsy teo i Hery raha vao nandre ilay kiakiaka nataon’i Malala tany ambony. Niditra izy, i Malala amin’io tafarina mihitsy, hay taitra tampoka fa nanao nofy ratsy angamba, ilay tavoahangy nisy rano mafana koa mikodiadia amin’ny tany fa voadakan’ity marary tamin’ilay fahatairana teo. Nanatona i Hery sady nipetraka teo ambony fandriana, i Malala amin’io niezaka ny hatory ary natohony teo amin’ny tratran’ity malalany ny lohany. Fantany fa eo no ahazoany aina, eny na dia fotoana kely fotsiny aza. Nitady tambitamby teo izy, nangataka horotsirotsiana mba hampihena ny fanaintainany izay sady manjo ny sainy no manjo ihany koa ny vatany iray manontolo. Mafy tokoa marina izany hoe voafitaka. Soa fa i Hery no hitany teo ka nanamaivana ihany ny fanaintainany izy efa mila tsy ho tantiny intsony.
Tany ambany anefa, Ratrema niditra ny trano, efa nandrairay whisky tany am-piasàny tany angamba. Notsenain’i Alexia ka nosarihiny hipetraka aloha.
- "Mbola ao angaha i Hery?"
Nanainga soroka fotsiny i Alexia fa tsy niteny. Nitsangana indray Ratrema hijery am-badiny.
- "Papa, efa nampanantena ianao fa tsy hamoa-doza eo imason’i Neny intsony. Mangataka mihitsy aho raha azo atao, aza mbola miakatra any aloha, sady nosintoniny ihany ny tanan-drainy. Papa ho’aho, je t’en supplie;"
Tsy nahasakana an-dRatrema anefa ity fitalahoan-janany fa niakatra tany ambony ihany izy hijery izay manjo am-badiny.
Nony efa akaiky ny tokonam-baravarana izy dia niahotra kely, nijanona aloha ; nangalarany fijery kely izay tao an’efitra. Indro hitany i Malala miondana amin’ny tratran’i Hery, ity farany manafosafo moramora ny tarehiny. Nisento tokana indray rangahy be, reny miakatra ny hasarotam-piaro mahita ity ataon’i Malala, amin’ny lafiny iray anefa dia nahatsiaro koa ny fahadisoany ihany izy raha nitsoaka ireto ankohonany tamin’ny fotoana sarotra, eo ihany koa ny alahelo noho ny famitahana ankitsirano ity vadiny. Ny fitsabahan’i Hery amin’izay andraikitra raisiny izay angamba no mampitroatra azy tahaka izao.
Niala moramora ny varavarana izy, saika hidina, nefa nijanona sy nisaina kely aloha. Afaka segondra vitsivitsy, niditra ny efitranony ihany.
Izy roa, na lazaina ihany koa hoe : izy mianaka koa, tsy nahita na nandre ny fidiran-dRatrema, ka raha tsy somary nikohaka ingahy rainy tsy nitodika i Hery.
Fantatr’i Hery tsara fa efa ao an-trano Ratrema fa asa na mody tsy noraharahiany na tena fiantsiana tsotra izao. Ratrema amin’io mamonkona ny totohondriny sady toa mivandravandra azy. Vao nahita izany i Hery dia nitsangana, niezaka nampatory an’ i Malala handray ondana, ity farany nisintona ny lamba ka nisakobona tao anaty fandriana tsy te-hahita indray izay ady mety hitranga eo.
Samy nifampivandravandra izay tsy izy teo aloha i Ratrema sy Hery. Toa nifandinika teo izy mianaka, tahaka ireny biby masika te-hampiseho ny heriny amin’ny masony ireny. Nilefitra tampoka anefa i hery :
- "Papa," hoy izy, "tsy mila ady amin’ity andro alina aho fa aleo aho handeha hody izao dia izao ihany;" sady nivily lalana izy tsy hifanehatra amin-dRatrema. Vao tafavoaka ny varavarana anefa dia niteny mafy Ratrema :
- "Ho aiza ialahy iny ! Raha mandingana ny tokonam-baravarako eo ialahy dia aza mihevitra ny hiditra ato amiko intsony mandakizay; ny lalan’ialahy zorina, tsy mila izay ialahy aho ! matesa any amin’izay odian’ialahy any ! olon-tsy vanona."
Nigogogogo nitomany indray i Malala tao anaty bodofotsiny tao. Taitra i Alexia nandre ny feon’ity rainy. I Hery teo amin’ny tohatra saika hijanona, mafy taminy loatra ilay tenin-dRatrema, ary tahaka ireny kibay mively ny lamosiny ireny. Notohizany ny lalany, nodinganiny ihany ilay tokonam-baravarany, nivoaka ny trano izy hamonjy ny vavahady. Hazavana kelin’ny jiro sisa no nahatazanan’i Alexia ity malalany teo am-bavahady, nihazakazaka nivoaka izy fa tsy nahatratra an’i Hery intsony. Nandeha mafy i Hery hamonjy izay arabe akaiky azy amin’iny lalan’Ivandry iny. Soa fa vao tafavoaka ilay lalana izy dia nisy fiarakaretsaka sendra nandalo ka dia nosakanany hitondra azy mody tany antranony.
Mafy ity mahazo ahy, aza mba halan-dRafozana ihany, hoy izy. Nalahelo kely an’i Alexia izy, tsy niala tao an-tsainy ilay alok’i Alexia niantsoantso azy hoe : Hery an ! miverena fa aza manao ohatran'io moa e …
Vao tonga tao an-trano i Hery dia namoha ny efitranony. Namonjy fandriana haingana hanalàny ity vesatry ny fiainana babeny tao an-damosiny. Navoakany avokoa izay zavatra rehetra tany am-paosiny tany, hay adinony tany amin-dry Alexia ny findainy. Nieritreritra kely teo izy, avy eo nidina tany ambany, noraisiny ilay telefaona tao an-trano, saika hiantso ilay Malalany kanjo napetrany ; notsoahiny avy eo ny tariby fa fantany tsara fa hanenoneno eo io mandra-paha marainan’ny andro.
Niakatra izy avy eo natory, nivadibadika am-pandriana teo nefa zara raha nahazo torimaso fa niady saina lalina ;
Nony maraina, raha tsy nigodongodona tao amin’ny efitra ilany tsy taitra i Hery, niarina teo am-pandriana izy dia nankao amin’ny efitra nisy ny raibeny sy ny renibeny. Harona efa vita fatotra sy sacoches roa lehibe no hitany teo amin’ny gorodona, i Dadabe sy Bebe amin’io somokotra ery manangona izay akanjon’izy mivady sisa tavela ao anaty larimoara.
- "Fa ho aiza ianareo ry Bebe?"
- "Izao ry ise an!" hoy i dadabe, angamba efa tena ampy kosa angamba izay izay nitoeranay mivady teto amin’ise izay, nisy hafatra tonga avy any ambanivohitra fa miandry anay ny akoho amam-borona, efa omaly izay no azonay, fa ise vao tonga omaly alina dia lasa indray ; tsy maintsy mandeha izahay mivady fa efa lehibe koa ange ise e ! Io ny tranon-dRay amandrenin’ise dia kolokoloy tsara, mety afaka tapa-bolana any izahay miverina mandalo indray."
Tsy nahateny i Hery, amin’ny lafiny iray te hanana fahanginana tanteraka izy amin’izao mahazo azy izao, amin’ny lafiny iray anefa, mila ny tambitamby avy amin’ireto raibeny sy renibeny ireto koa izy, tsy sahy nilaza izay nanjo azy anefa ny anao lahy, hany heriny dia nanaiky fotsiny ny handehanan’ireto ray aman-drenibe ireto.
Niomana sy nisakafo izy avy eo, varimbariana ery, tsy mahatsiaro izay hanina alefa ao am-bava. Niandry fotsiny izay hiaingàn’izy rehetra avy eo. Nibata ny entana tao anatin’ny fiarakaretsaka dia nandefa an’izy mivady tany amin’ny taxi-brousse. Nohidiany ny trano, dia lasa koa i Hery namonjy ny toeram-piasàny.
Vao lavidavitra tsy ho tonga i Hery dia efa nahita i Alexia miandry azy eo am-bavahady. Tsara tarehy izay tsy izy, asa tokoa anefa izay tena mandifotra ny sainy fa raha vao nifanakaiky izy roa dia ny fanontaniana momba ny fahasalaman’i Malala no nivoaka ny vavany voalohany.
- "Tsy misy bonjour akory ve?" hoy i Alexia, "sady niezaka hanakatra ny molotr’i Hery izy. Zara raha oroka no nataon’i Hery ary naviliny teny amin’ny takolany akory aza ny molony ; Tsy nisy azon'i Alexia natao afatsy ny nanaiki-molotra fotsiny nony avy eo. Novohainy ny poketrany dia natolony an’i Hery ilay finday hadino tany an-trano ny alin'io.
- "Fa angaha misy simba izao ny telefaoninareo any an-trano no tsy mahazo mihitsy." Fantatr’i Alexia fa tena lotika ny fon’i Hery ka nataony mihitsy izay tsy hahazoana miantso azy. Efa niantso tokoa mantsy izy talohan’ny nahatongavan’i Hery tany an-tranony ny alina, nefa tsy nisy nandray, ary tena nandeha tsara ilay antso, avy eo anefa occupé foana mandra-paharainan’ny andro ka naleony niandry an’i Hery tany am-piasàny mihitsy.
- "lasa aho," hoy izy tamin'ny feo toa feno hatezerana nefa toa mifono alahelo ampo ihany koa. Vao dify teo anatrehan'i Hery anefa izy dia nanganohano ny masony nieritreritra ny zavatra niainany vao segondra vitsy monja teo.
- "Alexia ! andraso aho aloha," vao mainka anefa i Alexia nihazakazaka niala ilay toerana. Tsy hitan’i Hery izay hatao, ny tena efa ho diso fidirana. Hany heriny dia niverina namonjy ny vavahady handray ny asany.
Tsy nitombin-tsaina intsony i Hery, ilay notiavina nitsoaka ny tena, ny tena voaroaka sady tsy afaka mandia tany any amin-dRafozana, i Malala tsy fantatra intsony izay nahazo azy izay, i Cynthia sy Toky koa mba nanao ahoana izay? I Dadabe sy Bebe lasa tampoka tsy misy fifampidinihana, sanatria ve tezitra izy mivady fa tsy eo lava aho dia ataoko ho tahaka ny mpiandry tanàna fotsiny izy ireo?
Very hevitra teo i Hery, niezaka nanala ny fony tamin’ny asa izy ka tsy niraharaha izay hitranga. Tsy nisy niantsoantso azy rahateo moa tany am-piasàna.
Niezaka mafy mihitsy izy hahavita izay sonia, kajikajy, tatitra ara-bola maro samihafa efa niandry azy izay hadinodinony tamin'iny herinandro lasa iny. Tsy niala sasatra mihitsy izy ary tsy nihato raha tsy nahatsiaro torovana ny sainy sy ny tanany. Nataony avokoa izany hanadinoany izay olana nandreraka ny sainy hatramin'ny omaly harivan'io. Tena lotika ny fony, vao mijanona kely anefa izy amin'ny asa izay nataony dia toa ny tenin-dRatrema foana no manakoako ao an-tsainy. Izy ilay nandroaka ary koa tsy hanaiky ny hidiran'i Hery any aminy intsony. Izao izany ilay atao hoe : halan-drafozana, nefa hoy izy misy fitenenan'ny ntaolo hoe : " raha tiana ny vady, ny rafozana no tsinjovi-mandeha ".
Shhh, hoy i Hery tany an-tsainy tany, aleo izany ho any, raha Ratrema moa no tsy tia, aleo izy ho any fa izy efa-mianaka no tena tsy mampilamina ny eritreritro. Raha ny tena tiako izao dia hanala azy miaraka amin'ny bandy akama, hilaboraingy rahalina, kanefa, ahoana moa no iantsoana an-dry zalahy izao, ny andro ity Talata, gorôbaka rahateo araka ny filazan-dry zalahy ihany. Aleo aloha jerena ato anatin'ity diary ity. Ireto sy ireto avy, aleo asiana marika. Maroamaro ihany izy izany no misy mailaka. Ndeha handefasana mailaka miaraka in-dray mipoaka ry zalahy, izay tsy tratra antso ihany no antsoina an-tariby na finday. Aleo raiketina amin'ny zoma hariva rangahy an! ny trano malalaka tsy misy olona rahateo.
Nosokafany ny tranonkala www.wanadoo.mg, nojereny ny mailaka. Feno hafatr'i Alexia marobe tao. Ndryyy ! malahelo kely ilay malalako indray aho izany. Dia loza koa letsy izany fa tahaka ny tsy noraharahiako akory ange izy tamin'ny maraina teo e ! Izy rahateo tonga dia lasa nirintona. Very ialahy Ra-Hery raha ilaozan'iny sipa iny, sady nojereny tsirairay izao hafatra mamy marobe mitory fitiavana saika efa ho isan'andro.
Izany letsy no tena fitiavana, nefa dia potehin'ialahy, raha nahay nifehy tena kely fotsiny ialahy dia… sshhh, rano raraka tsy azo raofina intsony izany.
Nanoratra izay hafatra alefany amin'ireto namany izy, nilaza tamin-dry zalahy hoe : amin'ny zoma hariva izao any an-trano. Samy mitondra izay tiany ho entina.
Aleo koa handefasana SMS avokoa dia amin'izay tonga tsara ny hafatra.
Dia variana teo ampototry ny solosaina teo izy ny atoandro iray manontolo. Talata tokoa moa, andro fahazarany nankany amin-dRatrema nefa indrisy.
Rehefa vita izay nataony dia tafaverina teo amin'ny takila voalohany ilay tranokala izy.
- Aleo mba hijery izay ato anaty forum ato fa efa elaela aho izao no tsy nanokatra ity. I Alexia ihany mantsy no nahitako azy ity. Nosokatsokafany teo izay nahaliana azy, olana, mitady an'izao, mitady fitiavana, misy zava-betaveta ihany koa. Dia lasa saina teo izy ka mba namorona sujet vaovao tao amin'ny sampana " séduction et sexualité " : " reny sy zanaka ampirafesim-binanto. Loza fa vonjeo ! "
Dia izao no nosoratany tao :
Nandalo tany amin'ilay ilay Jobako aho fa fotoananay tamin'io. 17 taona izy ary izaho 25 taona. Zoma tolakandro ny andro. Tsy ao izy hoy ilay mpanampiny fa mbola nirahin'i mamany ary mety ho elaela vao ho avy. Nadroso ihany aho satria nampandrosoina. Ilay mamany no tao amin'ny salon nijery fahitalavitra. Naka vera izy dia nampidina zavam-pisotro misy alikaola kely ho ahy. 15 minitra taty aoriana, naka kapila mangirana izy dia nilaza tamiko fa hoe aleo mijery horonantsary mihetsika fa tsy mamely ilay tao amin'ny fahitalavitra. Tantaram-pitiavana masaka be ilay horonantsary nojerenay. Nisy ampahany maromaro ahitana olona manao firaisana ara-nofo tao. Teo amin'ilay ampahany fahatelo amin'ilay olona manao firaisana iny indrindra dia toa tsy naharitra intsony ilay mamany fa nosafoiny ny filahiako sady hoy izy, " tsy dangitra ve ialahy amin'izao? " Niala kely aho saingy tonga dia nobedainy sady mbola vao maika nangaroniny ny tao anaty patalohako no notereny hovahana ny hidiny. Izaho moa efa te hanao dia navelako izy nanao izay tiany hatao teo. Sady nanafosafo ny fivaviany mbola tao anaty silipony teo izy no nitsetsitsetsitra ny filahiako. Tsy naharitra intsony izy nony kelikely fa noesoriny tanteraka ny silipo teny ankodiny ary dia nanao be teo izahay. 35 taona eo angamba ilay mamany ary tena mbola mitana na tarehy na ny bika. Vita ny natao dia menamenatra aho fa izy mody tsy nanisy sira. Efa somary harivariva vao tonga ilay zanany. Nitady hevitra hivoahana tao haingana aho dia nilaza fa mbola maimaika. Sankodiavatra be anefa aho no tena marina. Tsy nadalondalo tany amindry zareo intsony aho taorianan'io fisehoan-javatra io. Roa herinandro taty aoriana, nisy nametraka hafatra tao am-piasana fa mila ahy maika dia maika ary miandry ahy any ivelany hono io olona io. Nivoaka aho ary akory ny hagagako fa ilay maman'ilay Jobako no tao. Tonga aho dia notaritiny hoe mila miresaka aminy. Niditra tamin'ilay Salon de thé tsy dia lavitra teo izahay dia nilaza izy vao tafapetraka izahay fa matahotra hono izy sao misy mahita ka dia notaominy aho haka toerana mangingina miaraka aminy ao anaty fiara. Vao tafiditra tao anaty fiarany izahay dia efa tsy tratra ny tanany iray fa efa mitady hanafosafo sahady ny filahiako mbola mifono tsara tao anaty pataloha. Tsy hay tohaina ny tao anatiko fa tonga dia nivonto avy hatrany ary dia tsy aritro intsony ka navelako izy hanarapo tamin'izay tiany hatao teo. Bikan'olona kosa aloha izy e ! Tena ao amin'ilay mampatsiro azy mihintsy. Vita ny natao dia nody fanina indray ny anao vavy. Telo volana taty aoriana, efa lasa fahazaranay ny mangala-dia mandeha manao firaisana aranofo antselika. Mandritra izay fotoana rehetra izay anefa dia mbola miaraka amin'ilay jobako ihany aho. Eni-mbolana aty aoriana izao, Bevohoka hono i rabofy ary izaho no lazainy fa tompony ary ho tazoniny ilay zaza fa reveny be hono aho.
Dia tsy nitsahatra ny revy fa nitohy ihany, izao efa teraka koa ny zaza faharoa izay mbola ahy, ary fantatry ny rafozan-dahiko satria efa tratran'izy sy ny jobako ambody omby izahay.
Voaroaka aho izao tsy mahazo mankany amin-dry zareo intsony. Dia tsy hitako izay hatao : tsy hiraharaha, zanaky ny tena roa tsy foiko mihitsy, ilay jobako nefa mbola tena tiako sady tia ahy koa.
Vonjeo re olona fa loza.
Dia tsy nisalasala i Hery nandray ny solon'anarana hoe : Ikelimaditra. Ary mailaka vao noforonony no nataony ifandraisana tao.
Ikelimaditra : Maditra marina letsy ialahy ity ry Hery. Izao hadalàna izao vitan'ialahy daholo. Leo sahady indray izy fa toa mampisaina azy zavatra betsaka ity nataony ity.
-Asa indray izay mbola hadalako nandefa io sujet io, sady toa niontana tampoka teo ny fony.
Aleo hitranga any izay hitranga fa ho hitantsika eo.
Najanony ny solosaina dia nandeha nivoaka izy hitady harapaka tany ivelany.
Loza fa hay lany fahana ny findainy. Ny chargeur any an-trano. Tsy nampaninona azy akory anefa izany, sao dia manenoneno eo koa, hoy izy, ka vao mainka mankarary an-doha.
Nony tafaverina avy nisakafo izy dia nanohy ny asany indray. Na izany aza anefa toa mahatsiarotsiaro an'i Alexia foana, i Malala ve izay nanao ahoana, i Toky sy Cynthia. Mba nanao ahoana ange izy ireo izay e !
Variana tamin'ny asany teo izy ka saika tsy nahatsiaro ny firavàna. Raha tsy nanao veloma azy ny mpiara-miasa vao taitra ny lehilahy, dia mba nampirin'entana koa dia lasa nody.
-Tsy misy olona izao ao an-trano mikarakara sakafo, fa aleo aloha mandalo ato amin'ity snack ity, hividy sakafo efa vonona ka hafanaina fotsiny rehefa hatory.
Nataony ny commande, niandry elaela kely. Nipetraka teo amin'ny seza fiandrasana, sady misy fitaratra lehibe velarana nanoloana azy. Tsy sahiny akory ny nijery ny tarehiny fa tahaka ny misy omby masiaka izany tady hanoto azy ao aoriana ao. Aleo marina enjehin'ny omby masiaka toy izay enjehin'ny eritreritra hoy izy sady niondrika izy fa tsy nijery.
Tampoka anefa, tao aoriany tao nisy feo henony toa niteny hoe : " SALUT MON BEAU-GOSSE "
« salut mon beau-gosse !!!! » Feom-behivavy tsy dia fandreny matetika ilay izy. Nefa vao haingana no nahatadidiavany azy. Nitraka kely i Hery, somary nikentrona, dia nojereny teo amin’ilay fitaratra lehibe. Indro vehivavy mitsikitsiky izay maniry hiresaka mafy no mifanila aminy, ary tonga dia vavany fa tsy mba fijery mifanena akory. Mody mangata-maso, mibory volo hatreo amin’ny hatoka, manana endrika falifaly aok’izany. Nihodina tsimoramora teo ambonin’ilay seza i Hery hifanatrika amin’ity vehivavy, kanjo somary voasarika vetivety ny masony hibanjina ireto nono mampite-hamehy anaty tanan-droa ireto. Nifampijery tsara izy ireo avy eo.
- "Hay ve ianao e ! Gaga be aho."
Misy taratasiko any dia vakio tsara, sady niteny tamin’ny teny malefaka izy, nampidiriny tao anaty kitapo kelin’i Hery ilay zavatra.
- "fa maninona ianao e ! marary angaha? " Nisento tokana fotsiny izy.
Injay fa nidina i Alexia, tsy niteny intsony i Malala, ny fanondrony roa no natsindriny ny handriny dia lasa izy nipetraka teo amin’ny seza lava.
- "Ity misy fanomezana kely avy taty amiko," hoy i Alexia, boaty kely efajoro voafono mangirana ilay izy sady misy fatorana. Noraisin’i Alex ilay kitapo teny an-tanan’i Hery dia nosokafany hampidirany ity fanomezana. Nojereny ny tao anatiny, antontan-taratasy vitsy nentin’i Hery avy tany am-piasàna, misy horonan-karona ahitàna zavatra mifono, dia nalainy sady hoy izy, - "inona kay ity ry Hery ? "
Nivandravandra be i Malala tetsy amin’ny salon, nivaloharika ohatr’izany. I Hery tsy nahita hotenenina. Nidobodoboka ny fony, ny mason’i Alexia no nobanjininy tsara. Tsy dia nahoan'i Alexia anefa izay tao anatin'ilay fonosana ary dia naveriny tao anaty kitapo ilay zavatra. Nifanoroka indray izy roa dia nandeha nanao veloma an’i Malala i Hery. I Malala anefa amin’io mibanjina ny mason’i Hery tsy misy ohatran'izany mba hampitany ny adin-tsaina mahazo azy kanefa tsy nety tody tamin’i Hery mihitsy izay tiany hambara. Raha rahona mandalo miserana tokoa, tsy ampy hanaloka ilay masoandro mibaliaka niainan’izy roa ny tolakandro teo.
Nandray fiarakaretsaka i Hery nody, nisaintsaina lalina ny fahasambarana niainan’izy roa tany Ambatofotsy. Andro iray tsy ho hadinony amin’ny fiainany iny andro iny. Na dia efa maizina aza ny andro tamin'izay dia toa masoandro mibaliaka no namiratra tao an-tsainy.
Tsaroany ery i Alexia mijoro eo anoloany, ny hafanàna amin’io mamely, sary miraikitra amin’ny masony ny hatsaran-tarehy, ny volo lava any an-damosina, ny tratra lafatra tsy misy toa azy. Raha nisy anjely teto an-tany hoy izy tany antsainy tany dia tsy azo lavina fa i Alexia anisany. "Nahazo letsy ialahy RaHery," hoy izy, iza eto amin’ny tanàna no tsy te-hahazo an’iny sipa iny na ny mitovitovy aminy fotsiny aza ! Nanofinofy teo izy, kanjo, nisy fiara 4x4 nandefa ny jiro mahajambena tamin’ity fiara-karetsaka kely. Ni-klaxon ilay mpamily sady nanapipika ny jirony izay tsy nahaovoka akory fa tafajanona mihitsy. Natorak’i Hery teny amin’ny sisin-dalana ny masony, taitra tamin’ilay nofinofiny teo izy, nandalo tampoka taminy ny sarin’i Malala ilay fotsy hatsatra teo. Nalainy ilay kitapo keliny dia nojereny, tsy azony an-tsaina mihitsy hoe inona ity, sao dia misy manjo an’i Malala ary, ka tsy tiany ho fantatry ny ao an-trano. Tsy andriny izay nahatongavany tao aminy. Tonga izy dia niakatra tany amin’ny efitranony. Valopy iray sy lamba mifono taratasy hafa ny tao. Nisokafany kanjo...
Nivoaka tao ilay silipiny efa tsy hitany izay ela izay, tsy adinony akory iny resaka iny fa nodiany tsy fantatra fotsiny. Nandalo niserana tao an-tsainy ny enim-bolana lasa, nampikorontana ny sainy indray ity zavatra-mitranga ity.
Nosokafany ilay taratasy, teny vitsy monja ny tao :
« Hery, miady mafy ny saiko fa tratrako Ratrema nampirafy ahy,
kely loatra ny aiko ».
Soratra tahaka izay no hany tao dia nampiova tanteraka ny fara-vodilanitra manga nofinofin’i Hery teo, toa nilentika tampoka ilay masoandro, nangatsiaka, nodimbiasan’ny rahona matevina. " Inona ity, ahoana indray no ataoko ?"
Noraisiny ny finday, hay adinony ny namelona azy hatrany Ambatofotsy. Novelominy dia niantso an’i Malala izy !
- "Allo ! Malala, maninona ianao izao. "
- " Hery, tsy afaka miteny mafy aho fa marary be daholo ny vatako iray manontolo. "
Tsy nahatanty ilay fihetsik’i Alexia teo tokoa ny anao vavy ka niakatra tany ambony niverina natory. Niandry izay higadonan-dRatrema fotsiny sisa; I Cynthia koa tamin'io fotoana io nitomany foana nefa tsy nety nampinonoana. Izy rahateo tsy manana aina intsony. Ny saina mety ihany, fa ny vatany no torovana tanteraka.
- "Hery an ! miverena aty fa mila anao aho ! "
Tsy hitan’i Hery izay hatao, noraisiny ny akanjo mafàna, niteny tamin-dry Dadabe fa tsy maintsy misy alehany any amin-dry Alexia dia nihazakazaka namonjy nivoaka ny arabe izy hitady fiarakaretsaka. Tsy nandry intsony ny sainy fa nieritreritra an’i Malala sy izay nahazo azy izy teny an-dalana.
Fotoana elaela taorian’ny nandehanan’i Hery vao nigadona teo am-bavahady ny fiaran-dRatrema. Tao anatin’izay no niantsoan’i Hery an’i Malala teo.
Niditra tao an-trano ilay raim-pianakaviana, avy dia nipetraka teo ambony seza namelona ny fahitalavitra. Ren’i alexia ny fahatongavan-drainy, sady hitany rahateo koa ny fiara avy teny am-baravaran-keliny. Nidina izy, falifaly ery, nanoroka an-dRainy.
- " Papa, tsara ve ny tontolo andronao androany ?" Nojeren-dRatrema tsara ity zanany.
- "Han, falifaly indray ange izany zanako izany e ! Tsy androany moa ilay noteneninao ahy tamin’ny zoma fa hivoaka kely ny renivohitra hiaraka amin’i Hery ? Tsy naninona ny fiara an, faly aho rehefa miramirana tahaka izao ity zanako ity."
- "Ie ! sady tena nahafinaritra, tany Ambatofotsy izahay roa, nilalao rano. Amin’ny manaraka isika rehetra angamba mankany, sady nipetraka izy no nitositosy teo amin-drainy teo, tahaka ireny zazavavy kely ireny.
Mahagaga tokoa fa tena miray fo sy saina mihitsy izy mianaka, mety ahatsiarovan-dRatrema an’i Vololona koa angamba i Alexia, indrindra izy izao efa mandia ny fahatanorany izao.
- "Fa aiza ny ankizy kely ? te hahita azy aho izany."
Nitsangana i Ratrema, dia niakatra tany ambony, nojereny aloha ny efitr’i Toky, tsy nisy olona tao, nanantena an’i Malala izy hoe mitaiza an’i Cynthia tao amin’ilay efitra vaovao, mbola tsy tao ihany koa.
- "Malala an !" sady nankany amin’ny efitranony izy.
Hitany teo i Toky kely matory aok’izany eo ambony fandriana sady eo akaikin’ny reniny. I Cynthia koa eo amin’ilay berceau fatoriany taitra sady manomboka mikenfonkefona. Nanatona azy izy dia noraisiny notrotroiny. Taitra tamin’ny fahatongavan-dRatrema i Cynhtia ka niverina nitomany indray.
I Malala amin’izay manome lamosina tsy nahateny tsy nahavolana, sady mibonoka ity lamba matevina nefa ny andro nivaivay aok’izany tamin’ny atoandro teo.
Nipetraka teo ambony fandriana Ratrema, ny zaza amin’io eny an-tanana ihany sady mitomany izay tsy izy. Ny reniny toa tsy taitra akory fa maninona angaha ?
- "Malala an!" hoy indray Ratrema, "mitomany ange ity zaza ity e!" Sady nokitihany ny vadiny hanaitra azy. Vao mainka anefa i Malala nihodina indray ka ny lamosiny no nataony ambony no nafeniny tao anaty ondana ny lohany.
- "Fa maninona ianao e?" Noritin-dRatrema tamin’ny tanany ilany ny lamba ka indro ny vadiny hitany fotsy hatsatra, malemilemy tsy nahasintona intsony ilay lamba. Ny sainy torovana tsy nahavita intsony izay tetika hamaliany faty an-dRatrema. Hany heriny dia nihodina tsimoramora, nandatsaka ny ranomasony sady nifokofoko.
Taitra koa i Toky sady tonga dia nitomany nahare an-jandriny. Tsy hitan-dRatrema izay hatao, nikoropaka izy, natsoiny i Alexia hiakatra hampangina an’i Toky no hitondra azy hijery fahitalavitra any ambany. Nantsoiny koa ilay mpanampy mpitaiza hanome biberon an’i Cynthia any amin’ny efitranony dia niverina teo amin’i Malala izy.
- "Malala, malala an ! maninona izany havako izany e?" Vao mainka nidradradradra nitomany i Malalatiana. Niezaka ny hanakifika ny tanan-dRatrema fa tsy nahavita intsony. Tomany eran’ny trano, ny zazakely angamba misy maharary azy fa tsy nijanona nitomany na dia nanao izay azony natao aza ilay mpanampy, i Toky raha vao misy mitomany dia iny koa lery manampy trotraka, sahirana ery Alexia mitaiza azy, Rafotsy ao ambony midradradradra aok’izany tsy laitra hampanginina.
Noraisin-Dratrema izy dia natohony tamin’ny tratrany, reny fa tena mafàna be ny lohan’ity vadiny, nosafosafoiny mora teo.
- "Malala an! aok’izay izany havako izany
- "fa misy inona ary ato ? dia ho sanatria ve ho fantatr’i Malala ny nataonay sy Corine tany am-piasàna, tsy mino izany aho, tsy misy mahalala mihitsy izay ataoko ao anaty birao, sao dia ilay Corine iny ary no nanao menace an’i Malala ? aza hitako," hoy Ratrema tany an-tsainy tany.
Noraisiny ny telefaona, niantso dokotera izy, dokotera efa mahazatra ny fianakaviana izy io, ary antsoina rehefa misy marary ato an-trano. Nazavain-dRatrema teo izay zava-mitranga. Naka fitsapàna hafanana izy avy eo, dia nandrotsaka fanafody anaty rano fa izay no nafaran’ilay dokotera mandra-pahatongany. Tena marary mafy ity vadiko ity, hoy izy, aleo aloha ho tonga i Dokotera dia ampidirina hopitaly indray fa sao dia hanahirana eto. Taitra izy nahita ny hafanàn’i Malala, tena loza ity. Efa nanomboka nitonitony i Malala tamin’izay fa tsy nitomany intsony, tsy nisy sahy niresaka, lasalasa saina i Ratrema amin’ity zavatra mitranga, efa narary ary i Malala ka tsy niantso ahy, fa maninona ary ?
Roapolo minitra taorian’izay vao tonga ny dokotera, hay niaraka niditra taminy tao koa i Hery.
- " Oay, tonga niverina ny malalako," hoy i Alexia, nanoroka ery, i Toky amin’io velon-tsiky indray nahita an’i Hery sady nanomboka nibitabitaka.
- " Faly ery izy izany nahita anao, izaho teto tena sahirana mihitsy nampangina azy, sady nomeny an’i Hery hotrotroiny i Toky.
- "Fa maninona i Malala ry Alex fa nantsoiny aho teo, marary hono izy ?"
- "Nitomany be izy teo, tsy haiko fa tena fotsy hatsatra be aloha tamin’izaho nandalo tao. Efa iny ny dokotera niakatra ao aminy ao, aleo aloa isika miandry aty fa tsy hitany eo ve izay tokony hatao?"
Adinodinon’i Hery izay zavatra nitranga, ity zanany faly ery eny an-trotroany no nahafinaritra azy. " Dray letsy ialahy ry Toky hoy izy aneritreritra, tena misy itovizana be amiko hono ialahy?" ity zazakely amin’io faly ery manafosafo ny lohan'ity "rainy" nitrotro azy . Dia variana teo izy telo mianaka.
Tany ambony kosa tamin’io…
Nanazava Ratrema fa 40°5 ny hafanan’i Malala teo ; vao hitan’ny dokotera ilay marary dia nojereny ny aty vavany,
- "Tena décalcifiée be mihitsy ny vadinao ry Ingahy Ratrema, raha izao fahitako azy izao, sady nojereny ny hohon’i Malala, tsy maintsy mitsindrona haingana, efa nitondra aho aty. Mampinono moa izy io ? Sao dia nisy zavatra nanaitra azy ary androany." Sady naka ny fitaovana fanindromana ihany izy. Reny koa i Cynthia mbola mitomany ao amin’ny efitra ilany ;
- "Ilay zanakareo angaha izany," hoy indray izy, "aleo aloha ho vitako ity dia mijery azy isika. Sao dia taitra tampoka ianao Ramatoa androany, sao dia nisy fiara saika handona anao teny an-dalana?"
Tsy nahateny mihitsy i Malala fa ny masony no natsirempirempiny fa nahatsiaro naharary azy ilay tsindrona.
Aleo aloha izy haka aina tsara, ireto no fanafody tsy maintsy vidianareo izao, any amin’ny farmasia mpiandry raharaha, dia nanoratra izy.
- "andao ary jerena izao zazakely mitomany izao, nivadika tao an’efitra izy dia noraisiny ilay zaza efa tora-kelin’ny tomany ; novahany ny akanjony, nojereny ny atin’akanjony, somary taitra kely izy, nangatahany ilay mpanampy raha mbola hitany ny lamban-jaza fanary teo alohan’io.
- "Andana jereo," hoy Ratrema, dia nidina ilay Ramatoa nitady ilay lamba efa nariany teo. Afaka kelikely, maharary kibo be ity zaza ity, raha izao no fandehany dia nivadi-nono ny reniny, mino mihitsy aho nisy nahataitra azy tampoka tany ho any, asa efa tamin’ny maraina angamba, tsy fantapantatrao ve ?"
- "Toneo tsara ny fon’ny vadinao ry Ingahy Ratrema, mila maka aina be mihitsy izy, mila entina maka rivotra kely koa any ambanivohitra any aza.
Naka tatatasy vaovao indray izy dia nanoratra izay fanafody tokony ho an’i Cynthia sy ny momba izay tokony hampiasàna azy. Efa dokoteran-dry zareo izy io,efa ho 5 taona izay, manana fahaizana manokana momba ny reny sy ny zaza rahateo, ka izy foana no manara-maso an’i Toky, ary amin’izao dia i Cynthia indray.
Gaga i Ratrema, vita izay rehetra izay, dia nidina ry zareo,
- "Rahampitso aho," hoy ilay Dokotera, "tsy maintsy miverina, inoako fa miasa haingana ilay tsindrona teo, rehefa atosiky ny fanafody hafa koa iny dia hiafana haingana ny vadinao. Tandremo fotsiny izy, tsy hampinono aloha fa …"
Vao tafidina tany ambany anefa dia nahita an’i Hery Ratrema, nivandravandra aok’izany mahita an’ity vinantony mitrotro an-janany. Navelany nandeha ilay Dokotera dia niverina izy.
Mody tony aloha, vao niteny tampoka,
- "Tsy efa niteny ve aho fa tsy mahazo mankaty ialahy raha vao alina toy izao, sady nanomboka nitrerona izy. Ialahy an ! rahefa izay dia izay, maninona aty koa ialahy io ? Tsy manana lava-trano hatoriana angaha?"
- " Azafady indrindra ry Papa fa.." sady nosintomin’i Alexia ny rainy, "Papa an, nantsoin’i Neny ange izy hono teo e, ary aza mampiaka-peo fa misy marary ange eto e!"
Na reraka aza i Malala tany ambony dia reny ihany ilay trerona nataon-dRatrema teo, azony an-tsaina fa tonga i Hery. Nitomany indray izy.
- "Hijery an’i Malala mihitsy no nahatongavako aty amin’izao alina izao. Izy mihitsy no niantso ahy, efa ho antsasak’adiny izay ; aleo aho hiakatra hijery azy.
Tezitra i Ratrema fa tsy nahavita nanainga tanana akory, ny zanany vavy etsy, misarangotra aminy mba hampitony ny fahatezerany.
Lasa i Hery niakatra, i Toky mbola trotroiny ihany; niditra tao amin’ny efitrano, nalahelo kely izy nahita an’i Malala fotsy hatsatra matory eo ambony fandriana.
Nipetraka izy, navelany handehandeha i Toky kely, noraisiny ny tanan’i Malala, azony an-tsaina sahady ny tebiteby mahazo ity renin-janany. Ny mason’i Malala sisa no natopiny teny amin’I Hery hilazany izay manjo sy mampiady mafy ny sainy.
Afaka kelikely dia niteny mora dia mora izy :
- "Hery an ! nivadi-nono hono aho," hoy ilay dokotera teo.
Tsy niteny intsony izy roa, fa ny safosafon’ny tanana no natao hampitony ity marary.
Niakatra moramora i Alexia, narahin-dRatrema tao aoriana, nony niditra izy ireo, niverina indray ny fivandravandrana be ! Tsy hitan’i Alexia izay hatao, i Malala etsy mampikimpy ny masony fotsiny, tsy te-hahita izay zavatra hitranga indray.
Tsy nahatony fo intsony i Hery dia nitsangana :
- "Ianao ihany Rangahy ity no nahatonga izao an!" Sady natsipiny teny amin-dRatrema ilay taratasy kely avy tany amin’i Malala.
Taitra i Ratrema, novakiany ilay taratasy kely. Romotra ny anao lahy, nalatsany tamin’ny tany ilay taratasy dia nisintona an’i Hery izy sady noraisiny ny vozon’akanjony.
- "Iza no miteny an’ialahy mba hiditra amin’ny fiainan-tokantranoko. Tsy anjaran’ialahy ny aty, any amin’ialahy ialahy manatsipitsipy izay tian’ialahy hatsipy fa tsy aty amiko velively. Lehilahy tsy vanona, adinon’ialahy angaha ny nataon’ialahy hatramin’izay; Ny zanako no potipotehin’ialahy tahaka izao. Hahalala an-dRatrema ialahy anio."
Niakatra ny feo, izy mianaka vehivavy etsy mitomany, ilay taratasy efa nalain’i Alexia sady efa novakiany, niverina indray ny tomany, ny dardradradra, ren’ny mpanampy rehetra tany ambany izay nitranga.
Nanalan-dRatrema ny fony teo aloha i Hery, ity farany tsy nahita hotenenina intsony fa nangina aloha.
Asa tokoa, nahatsiaro ho diso ihany angamba Ratrema ka napetrany ihany i Hery fa tsy nokitihany akory. Nafàna ny fony, naleony nidina tany ambany, nanaovany ny akanjony avy niasa teo, nakarapony ny varavarana dia lasa izy namelona ny fiarany. Klaxon nanaitra ny manodidina no niantsoany ilay mpiambina ny tanàna hivoahany. Nigika aok’izany ny fiaingan’ilay 4x4 teo amin’ny arabe. Tsy hita intsony izay hatao, izy mianaka etsy mitomany izay tsy izy, very hevitra amin’izay tokony hatao.
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (5) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Somary nihorirana kely Malala hamoha ity varavarana, nahodiny moramora ny poignet, kanjo nihidy ilay izy. Naveriny fanindroany dia najanony tampoka.
Nitodika nijery ilay sekretera izy:
- "Tena cliente-nareo be mihitsy moa izany ramatoa izany e?"
- "Eny Mme Malalatiana, efa ho valo volana izy izay no manana tolotr’asa atao ato aminay. Sady orinasa tena mifandray be aminay koa no tantanan’io ramatoa io."
- "Hay," sady nanapotsitra ny handriny tamin’ny fanondrony izy fa nahare nanaintaina teo ambony masony teo. Ny zazakely amin’io eny an-trotroana ihany. Niezaka ny hitandrina Malala mba tsy hianjera sady nanatona ny biraon’ilay sekretera.
- "An! nieritreritra aho fa aleo angamba izy tsy helingelenina sao dia tena manahirana azy. Manjary mampifangaro ny asany amin’ny tokantranony koa izy raha niditra tampoka teo aho. Nandalo fotsiny aho fa tsy hoe inona akory ka! Aza tenenina azy akory hoe teo aho; fa raha manontany izy dia… eny e! aza tenenina akory fa teo aho. Misaotra betsaka Mme Sahondra an!"
Lasa Malala niverina teny amin’ny amin’ny ascenceur, dia naterin’ilay sekretera izy mianaka. Tsy tantin’i Malala intsony ity zavatra nahazo azy, hitany amin’izao fa hay nisy zavatra hafa nandalo teo amin’ny fiainan-tokantranony kanefa tsy reny sady tsy fantany akory.
- "Valo volana…" Izay ilay valifaty, loza tokoa.
Raha ny tena tian’i Malala tokoa angamba dia ny hampitsikafona amin’ny tany izao ramatoa izao fa saingy nihidy ilay biraon-dRatrema. Tsy tiany hahoraka eo amin’ny mpiasa koa sao ny ho avin’ireto zazakely no ho sampona tampoka eo. Noraisiny ny findainy, nantsoiny Ratrema, saingy teo am-piandrasana ilay antso dia notapahiny. Nanganohano ny masony ary mila tsy ho tantiny intsony ny hitana izay ranomaso latsaka, ka i Cynthia no natohany tamin’ny takolany mba hanalàny izay mavesatra rehetra mianjady taminy. Soa tokoa fa feo no reny fa raha izany rehetra izany angamba no hitany maso mivantana, dia ho nivadi-po tampoka teo izy.
- "Ratrema, efa nampoiziko ihany. Hitako tokoa ny vehivavy maro no saro-piaro, kay ny tsy hitrangan’ny toy izao."
Nezahiny naverina tao an-tsaina avokoa ny valo volana lasa: taiza avy Ratrema? Hay izany tena hambaboana ahy amin’ny hafaliana fotsiny ireny tambitamby, fanomezana sarobidy, fa ny akon’izay tany am-badika tany tena loza! Ity izy nanana fahaizana manokana tsy nandairan’ny safosafo rehefa izaho miara-matory aminy iny! Kay tamin’olon-kafa no tiany hampisehoana ny heriny. Lehilahy tokoa izany.
Hay izany izy ilay nandeha tournée tampoka taorian’ny nandevenana ny maman’i Hery iny ka… Lehilahy tsy vanona!
- "Tsy hanaiky ny hitsakitsahinao amin’izao fotsiny raha i Malalatiana! Ho hitanao ny valy bontana ataoko aminao."
Lasa izy namonjy ny fiarany hitondra azy sy Cynhtia any an-tranony.
Fa tao amin’ny biraon-dRatrema,
Olon-droa mananika ny lanitra fahafito no mifampitolona eo ambony birao. Mihamafy hatrany ny fihetsika rehetra, mandeha avokoa izao teny mitalaho, ny sefosefo, ny orokoroka samihafa; ny teny frantsay amin’io tsy teny frantsay intsony, voambolana hafa no re.
Hatraiza marina ny fiafaran’ny fahasambaran’ny lehilahy nahazoazo taona no ho tapitra raha tahaka izao e!
Sendra nitopy teny am-baravarana ny mason-dRatrema ka nahita ilay poignet nihodina; nijanona tampoka ny fihetsiny rehetra. Mbola hitany indray fa nihodina fanindroany; niala tamin’ilay ramatoa izy (Corine no anarany). Ity farany anefa tena efa eny amin’ny lanitra faha-fito, saingy mbola latsaka fahefany ihany; nofatorany tamin’ny sandriny roa ny valahan-dRatrema hanatona azy kokoa.
Tafala taminy ihany anefa Ratrema, tonga dia niezaka nandao ny biraony, kanjo voasaringotry ny patalohany teo amin’ny moro-tongony ka nampianjera azy. Nahay nitazona ny sezany izy ka tsy potraka, niharina, nampidiriny ny patalohany dia namonjy moramora ilay varavarana izy. Nahodiny koa ilay poignet dia hitany fa nihidy tsara. Nisento indray mandeha izy dia niverina teo amin’ny biraony ka naka ny sezany.
Corine amin’io naka toerana hitsilany teo ambony birao.
- "Ialahy kosa leitsy Ratrema tena tsss… efa tena kely ve leitsy sisa dia asa izay nahazo an’ialahy tampoka teo! Sa nahatsiaro tampoka an’i Madama indray ialahy ity ? Izaho ho’aho indraindray, ny vadiko tena manirikiry ahy mihitsy, tampotampoka eo izy tonga dia tsy te hanao intsony. Mbola tena mitana aloha raha ialahy e!" hoy i Corine nanohy ihany.
- "Sshhh, tahaka ny nahita olona namoha varavarana aho teo" sady naka afokasika izy no namelona ny pipany.
-"Angaha hadinon’ialahy fa izaho mihitsy aza no nanidy an’io teo?"
Noraisin-dRatrema ny telefaonina dia niantso an’i Mme Sahondra izy, kanjo tsy nisy namaly. Nampidiriny ny palitaony sady nankeny amin’ny varavarankely izy hanokatra ny lamba fanakonana. Nojereny Corine, tsy taitra akory fa maka aina eo ambony biraony. Ny akanjony amin’io mbola misokatra be mampiseho ireto tendrombohitra roa mampite-hiondana. Dray, dray, dray!
- "Anaovy ny akanjonao, dia mialà eo ambony biraoko eo, fa hosokafako ity lambam-baravaran-kely ity e!" hoy Ratrema
- "Sokafy fa maninoma moa, andro atoandro be io ka hisy hahita ve? Fitaratra be mangamanga no hitan’izay mpitily eny ivelany fa tsy ny ataontsika eto akory. Sady ialahy leitsy, izaho mbola tena te hankafy! Avia indray moa faranana ilay nataontsika teo e!"
Tsy nanaiky intsony Ratrema. Izaho hoy izy te hivoaka…
Nipotikana ery Corine nandray ny akanjony, nampiditra ny atin’akanjony ambany, ny zipony moa tsy niala teny aminy. Nesoriny tahaka ny tsy teo ilay akanjo ambony teny an-kodiny, ka nampiseho ny vatany ambony manontolo. Bika izany, ireny mahararak’ivy ny lehilahy sendra manara-maso ireny, ary koa maha-saro-piaro ny vehivavy izay efa manambady.
Nalainy ny tati-nono latsaka tamin’ny moquette dia nanaovany. Ratrema amin’io manara-maso azy ihany, mbola te hanafosafo kanefa…
Nampidirin’i Corine avy eo ny lobaka lava tanana misy peta-kofehy fotsy ranoray. Naveriny nanaovana ilay akanjo ambony nesoriny teo, dia namonjy fitaratra lehibe izy nijery ny maha-metimety azy kokoa, manjamaso, lokomena sns. Vita izay rehetra izay dia niverina nipetraka manoloana ny biraon-dRatrema izy.
Namerina niantso indray Ratrema, fa mbola tsy nisy namaly.
Novahany ny varavarana kanjo Mme Sahondra no indro hitany niditra teo amin’ny biraony, avy nanatitra an’i Malala.
- "Avy taiza ianao fa indroa aho teo no niantso?"
- "Azafady Ramose fa … (tsaroany ilay tenin’i Malala), nanatitra an’i …
- "Nisy olona nitady ahy angaha teo?"
Tsy hitan’ilay sekretera intsony izay hotenenina.
- Tsy haiko Ramose fa i Madama vadinao sy ilay zazakely trotroina iny no tonga teo. Nanontany fotsiny izy raha afaka hihaona aminao dia nolazaiko azy fa Mme Corine no miresaka aminao ao. Nefa nolazainy fa sao manelingelina anao hono dia lasa izy nony avy eo. Avy nanatitra azy teo amin’ny ascenceur aho izao tonga eto izao."
- "Madama a?! fa naninona taty koa i Malala? Naninona aho no tsy nantsoina tamin’ny telefaonina?"
- "Azafady Ramose fa efa niantso anao ange izy fa tsy nisy namaly fa angamba occupé! dia lasa izy namoha ny varavarana kanjo nihidy. Naleony nandeha fa sao hono manelingelina anao."
Tsy notohizan-dRatrema intsony ny resaka fa niditra avy hatrany izy sady niresaka tamin’i Corine:
- "Izay ary ilay efa nahiako, kely fotsiny dia tratran’i Malala teto isika. Mila malina fa tena hafahafa izany fandehan-javatra izany.
- "Hafahafa ahoana?" hoy Corine.
Tonga tany an-trano Malala afaka kelikely. Namonjy ny efitranony izy dia nidiny ny varavarany. Nataony tanaty berceau Cynthia avy eo, namonjy nipetraka ambony fandriana izy dia nitsilàny. Nalainy indray ny finday tany anaty poketrany dia nantsoiny Hery. Messagerie vocale no azony tao, dia naleony notapahana. Namerina niantso indray izy avy eo, fa mbola tahaka izay ihany.
Niharina kely izy dia nitanondrika indray. Nirotsaka ny ranomasony, nanala ny fony teo izy. Teo vao tsapany ny maha irery azy. “Navadiky ny vadiko” aho hoy izy niteny irery. Nisangodina ny sainy ary nahatsiaro fanina izy.
- "Hery, Hery tsy foiko, aiza ilay malalako?" Nidaboka tamin’ny fandriana indray… Nanaintaina be ny lohany ka lasa izy naka fanafody hampihafana azy. Dia niverina natory indray mba haka torimaso hanalàna ity zaka mavesatra reny tao an-tsofiny.
Nitatao vovonana ny andro vao niharina teo am-pandriana izy. Naka ny findainy indray dia namerina niantso an’i Hery.
Fa aiza moa Hery amin’io …
Eny an-dalana i Hery no nantsoin’ i Malala. Vao nahita ilay soratra MALALATIANA teo amin’ny findainy izy dia notapahany. Efa akaiky koa ny toerana nifanaovany fotoana tamin’i Alexia, ka naleony notapahana aloha.
Alexia tamin'io fotoana io efa niherikerika teo am-baravaran’ny restaurant nitady azy.
- "Soa fa tsy noraisiko," hoy izy niteny irery "fa aleo koa ho any…"
- "Manao ahoana ny malalako?" hoy Alexia, sady nifanoroka kely izy roa.
- "Andao tonga dia hiditra fa miha-vitsy ny toerana ato."
- "Efa ela angaha ianao no teo!"
- "Vao teo mihitsy fa andao hiditra e!"
Naka seza sy latabatra izy roa, navoakan’i Hery teo ny findainy tany am-paosiny tany.
- "Aleo aho aloha hamonjy efitra fivoahana fa efa tany am-piasàna aho no poritra kanefa maika hamonjy anao; sao dia lasa niandry elabe teo ny malalako ka tsy tantiko ny hampijoro irery anao teo."
Lasa izy nandeha. Afaka kelikely, niverina naneno indray ilay finday an'i Hery. Noraisin’i Alexia:
- "Allo Neny! fa ahoana?"
Diso fanantenana Malala fa i Hery no tiany hotadiavina.
- "An!" (nangina tampoka ny fifandraisana)… "fa angaha ianareo tsy ho avy hisakafo antoandro aty? Miandry anareo ange aho e!" hoy Malala.
- "O ry Neny a! alatsinainy anie androany e! rahampitso Hery vao mankany amintsika (efa tafaverina teo amin’ny toerany i Hery amin’io). Neny koa, fa maninona ary no manelingelina olona aty amin’ny restaurant aty!"
Nanontany Hery hoe iza no miresaka amin’i Alexia? Novaliany tamin’ny baiko moana fa ny reniny. Hendratrendratra ihany Hery, fa efa ela tokoa mantsy izay Malala no tsy niantso azy. Tadidiny ny tamin’ny andro taloha, ilay antsoantso an-telefaonina miverimberina milaza loza. Fa inona indray ity? Misy zavatra mitranga indray any ho any hoy izy tany an-tsainy tany.
Nony nifarana ilay antso dia nanontany Hery:
- "Fa misy inona indray hono?"
- "Sshhhh, asa indray izay mahazo an’i Neny fa lazainy hoe miandry antsika hono izy hisakafo, nefa alatsinainy androany. Ny fandaharam-potoanantsika roa efa vita. Efa naka permission aloha ialahy ity an!" sady nitsikitsiky ery Alexia.
- "Ieee! efa tamin’ny alakamisy aho no nangataka dia navelan-dry zareo. Tena tsy afaka mihitsy aho aloha raha androany maraina e! fa hoentin’ialahy ho aiza tokoa aloha ity izaho ity e!"
- "Surprise izany"! hoy Alexia. Notakariny horohana i Hery sady tsy menatra akory izy. Izy rahateo: ny bika aman’endrika ananany avokoa, ka narahan’ny olona maso tahaka ireny mpanakanto malaza ireny, na dia efa eny an-tratran’i Hery aza.
Nanatona avy eo ny serveuse, nandray an-tsoratra ny sakafo hohanin’izy roa.
Fa i Malalatiana tany an-trano, vao maika nalahelo. Tsy sahy niteny tamin’i Alexia hoe omeo ahy i Hery fa namorona izay tao an-tsainy tao. Fantany tsara fa rahampitso vao ho tonga any aminy Hery, ka naleony mody navadika ny resaka hoe: aiza ianareo no tsy tonga sns.
Nitsangana izy, dia nijery an-janany. Efa nampitonitony azy koa ilay fanafody ka afaka nijoro ihany izy. Misy manitontsintona azy anefa ny hozany iray manontolo; ny nonony toa reny misy mangidihidy. Rehefa hitany fa matory Cynthia dia nandeha nidina tany ambany rihana izy. Gaga izy nony avy eo nahita an-dRatrema mamaky gazety teo amin'ny salon. Tonga dia namonjy ny latabatra fisakafoanana izy mody tsy nahita an'ity vadiny.
- "Ary hay ve nareo mianaka nandalo tany am-piasàna e? Naninona ary raha niandry."
- "Ka efa namoha ny biraonao mihitsy ange aho fa nihidy dia naleoko tsy nanelingelina intsony sao manahirana anao e!"
- "Hay ve ianao ilay nanodina ny poignet teo. Nivory izahay dia nidina ny birao. Fa raha fantatro ange hoe tao ianao dia nivoaka aho e! “Rien n’est plus important que ma famille” sady naka an’i Toky izy hotrotroiny ary nentiny nanatona ny latabatra nisy an’i Malala.
- "Tsy maninona re izany fa mba nandalo fotsiny aho hijery izany biraonao vaovao ao amin’io trano fitaratra be io izany e!"
- "Fivoriana aho, fivoriana, plus important aho hoe, plus important…" hoy Malala tany an-tsainy tany. Nampitony fo mafy fotsiny izy mba tsy hitroatra.
Mafy ny mahazo azy fa nafeniny an-dRatrema. Ity farany indray kosa, toa faly ery mitaiza an’i Toky sady namahana azy ihany koa. Tsy azony an-tsaina anefa fa fantatr’i Malala izay nataony tany am-piasàna niaraka tamin’i Corine.
Tsy nahatelin-kanina Malala fa toa te hilaza amin-dRatrema ny mahazo azy, nefa tsy sahy. Ny hamaly faty no nibosesika tao an-tsainy
Nanomboka indray ny lohataona, nampidi-drano-ketsa i Betsimitatatra. Niova endrika avokoa ny voahary rehetra. Efa mihitsan-dravina ny zakarandahy ary mivonona ny hamonina volomparasy indray. Nanomboka namelana ny voninkazo rehefa avy niharitra ny hatsiaka mamirifirin’ny ririnina teto andrenivohitra.Zara raha nahitana rahona madinika teny amin’ny fara-vodilanitra.
Amin'ny iray ora antoandro ny andro tamin'izay. Indro Alexia sy Hery nivoaka ny toeram-pisakafoanana iray. Nafana ny andro tamin’izay ka akanjo ambony fotsy manifinify sy zipo lava mikopakopaka manaraka ny famindrany, ary kiraro misy taditady madinika izay rafetin’izato vodi-tongotra avo mampihenjana ny ranjony sady mapisongadina ny bikany tsy manam-paharoa, no nianjaikan'i Alexia. Hatsaran-tarehy izany. Maro tamin'ireo mpiandry taxi be nahita azy ireo no tsy naharitra fa nanara-maso azy ireo mandra-pidifiny tao anaty fiara izay najanona teo amin'ny kianja MDRM teo Ambohijatovo.
Niresaka kely izy roa:
- "Aleoko izaho no mitondra fa izaho no mahalala ny misy ilay toerana nofinidiko handehanantsika" hoy Alexia tamin'ny feo miangoty.
Nitsiky kely Hery ;
- "Tsy mampaninona mihitsy kah" hoy izy feno fahatokiana an’ity malalany sady niditra tao anaty fiara izy.
- "Tsy mampaninona anao akory fa mba hivoaka kely ny renivohitra isika? efa malalaka koa izao ny lalana ka vetivety isika dia tonga any."
- "Ianao no eo amin’ny familiana ka tsy afaka hiteny intsony aho," hoy Hery.
Nitsikitsiky ery Alexia. Nanaraka iny lalambem-pirenena mizotra mankany Antsirabe iny ry zareo. Afaka telopolo minitra taty aoriana dia nivily tamin'izay toerana mahafinaritra amoron-drano sady tsara rivotra izay ry zareo. Nisy Bungalow maorimaorina tao amin'io toerana io ary dia tsy nisalasala fa nanatona ny reception avy hatrany ry zareo. Gaga Hery nony nahafantatra fa efa nanantena ny fahatongavan'izy ireo ny mpiasa tao amin'ilay hotely. Hay efa nomanin’i Alexia tamin’ny antso an-taroby mialoha ny fahatongavan’izy roa. Efitrano voaravaka voninkazo mahafinaritra sady nisy sakafo efa voaomana no niandry azy roa handaniany ny alatsinainy harivany iray manontolo. Tsy niditra avy hatrany ny efitrano anefa izy roa fa mbola nijoro kely nitazatazana teo an-davarangana, ary finaritra ery nahatsinjo ilay farihy tsy dia lavitra teo nahitàny ankizy maromaro milalao pédalo.
- "Tsara e!" hoy Alexia, sady naka seza fipetrahana azo hatoritoriana izy, dia nasainy nipetraka teo i Hery. "Mbola tsy taty mihitsy ianao e?"
-"Iee, efa fantatro fotsiny ny fisiany, fa izao aho vao nahita maso azy. Marobe ny vahiny na tompon-tany mandalo aty. Merci Alexia," hoy indray Hery sady nisarika azy hiara-mipetraka taminy teo ambonin’ilay seza izy no nitrotro ilay malalany. Nifanoroka mafy izy roa tahaka ny mifandefa hafatra mangina mampiseho ny fisaorana sy mampifamatotra mafimafy kokoa ny fifankatiavany.
Afaka kelikely...noraisin’i Alexia ny finday rehetra dia novonoiny avokoa.
-"Hery a! efa natolotro anao ny tenako ary mbola hatolotro anao ihany koa ny ho aviko iray manontolo. Tiako mihitsy ny handefa any an-damosiko any ny olana mianjady amintsika, ny disadisa hatrizay afitsoky ny ao an-trano, te hiara-dia aminao aho, hitantana ny tananao. Tiako loatra ianao ry Hery a! Tsy mahay mitia hafa aho ankoatra anao,fa ianao irery."
Niondana moramora teo an-tratran’i Hery izy, hay nanganohano ny masony.
- "Tiako dia tiako tokoa ianao Alexia, ary raha ny faniriako aza dia ny hampakatra anao na dia izao anio dia anio izao ihany aza. Kenefa tadidio fa mbola mianatra ianao, ampiako tokoa ianao amin’ny lafiny rehetra hahavitanao izany, tsy handao anao mihitsy aho na oviana na oviana fa aza matahotra. Tsy ahoantsika izay disadisa any fa ny fifankatiavantsika no asandratro ambony."
Nisotro ranom-boankazo teo aloha izy roa, dia avy eo niara-niditra tao an-trano. Nitohy ny safosafo sy orokoroka misantatra sahady ny firaisan’izy roa ho nofo iray.
Efa harivariva mody masoandro vao nihevitra ny hiverina izy roa, rehefa avy nitsidika ity toerana mahafinaritra. Nandeha sambokely nitety an’i Madagasikara tao anatin’ny ora iray monja.
Nahafinaritra aok’izany iny tontolo andro hariva iny. Tsy ho hadinon’izy roa mihitsy akory iny alatsinainy hariva iny; fa hafa tokoa raha ny mpifankatia no mandalo maka rivotra any, indrindra raha mbola tsy tany mihitsy. Toa nisava tanteraka ny sorisory sy ny alahelon’i Hery rehetra navesatra taminy hatrizay. Tahaka ny hoe: adinony tany amin’ilay toerana mahafinaritra tany ny olana mianjady taminy nandritra ny taona iray sy tapany mahery, ka maivamaivana ery izy mitondra ny fiara nody, sady akaikin’olon-tiana rahateo.
Fa Malala kosa tany an-tranony mieritreritra lalina izay hataony. Tsy azony mihitsy ny ainy fa mararirary avokoa ny vatany. Tsy sahy nilaza tamin-dRatrema izay nitranga taminy izy, fa ny tetika hamaliana faty no nameno ny fony. Te hiantso dokotera nefa tsy sahy fa sao.........
Nantsoiny indray ny findain’i Hery, tsy nahazo mihitsy mandra-paharivan’ny andro.
Efa maizimaizina vao tonga tao an-drenivohitra izy roa. Nifanena tamin’izy ireo ny fitohanan’ny fifamoivozana mandalo an’Andoharanofotsy, Tanjombato, Akandimbahoaka iny; ny lalan’izy roa kosa, misosa satria ny rehetra andeha hody mivoaka ny tanàna, izy roa miverina hiditra ny renivohitra. Teny an-dalana dia nandeha ny resaka ny amin’ity Alexia tsy maintsy mody aloha any an-trano ity; indrindra moa fa tsy afaka matory any amin’i Hery mihitsy. Taorian’ilay nidiran’i Malala tany amin’ny hopitaly sy nahafatesan-dramatoa Ramihary dia niova be ny fiainan-dRatrema mianakavy. Niha-entitra izy amin’ireto zanany.
Raha ny tena tian’i Alexia dia ny hanatitra an’i Hery aloha vao mody, nefa ity andro efa miha-maizina ka tsy maintsy ny any aminy aloha no novonjena, avy eo i Hery mandray fiarakaretsaka mody.
Nampidirina ny tokontany ny fiara dia niara-niditra ny trano izy roa, faly ery sady mifampitantana aok’izany.
- "Mandrosoa aloha dia mipetrapetraha; misy zavatra tiako homena anao fa any ambony ilay izy," hoy Alexia.
-"An, aann annnnn! tena efa maizina ny andro fa tsy aleo aho aloha handeha!"
Tsy nohenoin’i Alex akory Hery fa tonga izy dia niakatra. Kanjo, iny Malala nijaikojaiko moramora avy any ambony, hay raha nahare ny fiara niditra sy nahita an’i Hery nitantana an’i Alexia teo izy dia nitsangana avy hatrany naka ity zavatra kely mifono efa nomaniny homena ity vinantony no sady olon-tiany rahateo.
Nitsikitsiky fotsiny Alexia nahita an-dreniny sady mampidoladola ny lohany. Nandrasany tsara Alexia ho tafiditra tany an’efitranony dia natolony an’i Hery ilay zavatra mifono.
- "Inona indray ity," hoy i Hery tamin’i Malala.
- "Shhhhut! sady nataon’i Malala teo amin’ny molony ny fanondrony."
Rehefa vita ny fikarakaràna tao amin’ny hopitaly dia nentina tany an-trano ity nofo mangatsiakan-dRamatoa Ramihary. Ankona ny fianakaviana rehetra, tsy misy mahalala ny antony.
Nifanjohy ny mpanao famangiana, tonga nampahery ireo havana, narahin'ireo tapaka sy namana.
Na dia teo aza ireo olona marobe nidodododo nampahery an'i Hery dia toa tsapany fa mitombo lanja hatrany ny havesatry ny adin-tsainy izay mila hampitolefika azy tanteraka. Tsy dia nahitana teny firy izy. Tsy ny alahelony ny reniny izay lasa nodimandry ihany anefa no nitambolona tao am-pony, fa teo ihany koa ny halahelony noho ireo hadalàna vitany. Notsakotsakoiny tsara ny hafatra farany navelan-dreniny ho azy. Manako tao an-tsainy foana ilay hoe: “Tadiavo foana ilay fitiavana nananan-drainao, izay no omeo an’i Alexia…”
Alexia, hoy izy tany an-tsainy tany, tena zohim-pahoriana miampy fahoriana aho raha miditra amin’io fianakaviana io. Jereo ity ialahy ry Hery, ny zanaka efa ho roa, ny vady hokasaina anefa tsy renin-janaka akory. Ary ity renin-janaka indray no renin’ity ho vady. Latsa-dranomaso matetika Hery nandritra io fotoana io.Toa rivotra mitsoka tao an-tsofiny fotsiny ny teny fankaherezana nolazain'ny olona taminy, toy ny hoe: "mahereza r’ise, aza misosoka alahelo intsony…"
Efa nanomboka alina vao tonga Ratrema sy Alexia. Raha vao niditra anefa izy dia notsenain’i Hery, ka tsy nahavita izay fitsapàna alahelo akory.
- "Aleo aloha hamangy anareo izahay mianaka," hoy Ratrema somary sadaikatra.
Niverina nipetraka i Hery, natao ny fombafomba rehetra. Vita izay dia niara-nipetraka tamin’ny fianakaviana izy mianaka, Alexia moa namonjy nipetraka teo akaikiny.
- "Nanao ahoana i Malala ry Alexia?" hoy Hery tampoka teo.
- "Tsy maninona intsony izy ka! angamba rahampitso maraina izy dia efa hiverina hody any an-trano. Andao aloha hivoaka ity efitra ity isika mba haka rivotra kely sady tsy mbola misy mpamangy koa tsinona."
Niara-nitsangana izy roa, dia nivoaka naka rivotra teny an-tokontany. Namonjy nipetraka tamin’ny dabilio, nofihinin’i Alexia ity malalany sady niondana teo amin’ny sorony izy. Tsy ela taorian'izay anefa dia latsaka indray ny ranomason’i Hery. Nitomany mafy izy sady nidradradradra tsy nisy toa izany, ka nanaitra ny olona tao an-trano izay namonjy nivoaka nampahery ity tovolahy toa diso fanantenana fa nilaozan'ity reny malalany. Niverina tao antsain'i Hery indray ny fahotana tsy roa aman-tany nataony tamin’i Malala, ka nahatonga izao fahafatesan-dreniny izao.
Ny ampitso, nandalo avokoa ny mpamangy rehetra, ny fiangonana, ny mpiara-miasa, ny fianakaviana lavitra, sy ireo rehetra tratr’antso. Nanotrona azy teo anilany teo foana Alexia nandritra ny naha-teo am-bohitra ny razana mandra-pahavitan'ny fandevenana.
Nandalo nitsidika azy ny mpiray tampo tamin’ny rainy saika isaky ny faran’ny herinandro. Matetika Hery no manontany azy ireo ny toetran’ity rainy, izay tsy misy tsaroany mihitsy fa mbola kely loatra izy tamin’ny nandaozany azy. Tsapany fa marina tokoa ireo hafatra napetraky ny reniny taminy.
Taorian'iny voina nitranga tamin'i Hery iny dia toa adinodinon-dRatrema ny fikasany hamaly faty an’i Hery tamin’ilay resaka silipo. Efa vitany tamin’i Malala tany amin’ny hopitaly moa araka ny eritreriny ny fanalàna ny fony.
Efa antomotra ny fotoana hahaterahan'i Malala. Tsy nanao firaisana intsony izy taorian’iny nanaovan-dRatrema azy iny. Somokotra ery ny anao vavy mibaiko ny mpanampy hanamboarana tsara ny efitra handraisana ity vahiny. Jejojejo ery mampiseho ity kibony amin’izay olona tonga ao an-trano. Tsy handriny ny fotoana hiterahany ity zanany tamin-dRatrema…
Isaky ny talata sy alakamisy ary sabotsy antoandro Hery no tonga misakafo any amin-dRatrema mianakavy. Matetika izy no avelan’i Malala hitaiza an’i Toky kely, ary toa adinodinon'i Malala ilay eritreritra hanao hadalàna toy ny teo aloha. Tsy nasian' i Hery resaka intsony ny momba ilay disadisa nahafaty ny reniny, satria mety hitarika zavatra hafa, fa dia naleony navalona mora tany. Hanangana olana vaovao eto amin’ny fianakaviana ve? hoy izy tany an-tsainy tany, ny efa lasa anefa tsy hiverina intsony.
Nifankahita matetika izy sy Alexia. Nandeha tany an-tranon'i Hery matetika izy roa saingy tsy navelan-dRatrema mihitsy ny hatorian’i Alexia tany. Efa nahita stage hatao koa moa izy eo amin’ny sehatra informatika izay nianarany, ka dia nilamindamina teo ny fiainany.
Na dia toa nilamina tahaka izany aza nefa ny fiainan'i Alexia dia toa tsikariny fa mihena tsy tahaka ny taloha ny fifankatiavan’izy sy Hery. Tsapany indraindray iny rehefa eo am-panaovana firaisana ara-nofo iny izy roa fa ohatra ny tsy mifantoka aminy mihitsy ny sain' i Hery. Azony ihany anefa ny antony, fa na dia izany aza dia nampametra-panontaniana azy ny mahatonga an’i Hery toa tsy dia manam-pitiavana be azy tahaka ny taloha intsony. Ny momba ny hanaovana ny raharahan’izy roa koa dia mahalana mihitsy vao mba noresahana, "vanim-potoana fisaonana tokoa angamba?" hoy Alexia niteny irery tany an-tsainy tany nandinika ny zavatra niainany.
Roa volana taorian’ny nahafatesan-dRamihary dia teraka i Cynthia, zanak’i Malala. Tena reniny navela ilay zazakely, tsy nahitàna endrika hafa fa kapoka iray. Hafaliana moa ny an-dRatrema, mazoto mody aloha mihitsy ny lehilahy mba ahafahany mitaiza ity zanany vavikely mahafatifaty.
Enim-bolana izay no lasa taorian’ny nahafatesan-dramatoa Ramihary. Enim-bolana nanalàna ny fahoriana tao am-pon’i Hery. Enim-bolana nifonan’i Hery ny fahotana be vitany. Enim-bolana koa anefa tsy mba niraisan’i Malalatiana tamin’ny vadiny. Ka atao ahoana moa? Ity farany, dia tena safononoky ny hafaliana isaky ny mahita ireto zanany; ny iray efa mitsangana ka miana-mandeha, ny iray tezaina ary mbola mena vava. Ny zokiny vavimatoa koa somokotra ery mamita ny fizaran’asa, fa hanomana mémoire ho famaranana ny fianarany dingana voalohany.
Olona tena tia zanaka dia tena tia zanaka tokoa raha i Ratrema. “Mino aho” hoy Malala “fa izay fahafenoan’ny fitiavany amin-janany izay no mahatonga an-dRatrema tsy rototra mihitsy hiray amiko. Ampy ahy koa ny tambitamby ataony, ny fanolorana fanomezana samihafa. Ividianany akanjo lafo vidy izaho sy ny ankizy”. Matetika Malala no mitady hanao amin-dRatrema, kanefa ity farany mandà sady milaza ho reraka sns… Efa nahazoazo taona koa angamba Ratrema ka tsy manana hery intsony hanatanterahana ny adidiny.
Asa! hita sy tsapan’i Malala koa ny toe-batany niova be taorian’ny niterahany an’i Cynthia.
Hany herin’i Malala dia ny mitady ilay fahatongavan’ny fahasambarany samirery izay efa niangaliany fotoana maromaro izay. Asesiny ampandalovina ao an-tsainy ireo fotoana mamy niarahany tamin’i Hery, toy ilay fanerena an-kolaka tany am-boalohany sy ilay tamin’izy bevohoka an'i Cynthia. Vao mieritreritra an'ireny izy dia henony toa misy varatra milatsaka izany any anaty lohany any ary injay fa henony tonga amin’ny faratampon’ny fahasambarany izy. "Mmmmhhhhh, Hery, raha teto mantsy ianao," hoy Malala tany an-tsainy tany…
Manao toy izany matetika izy eo am-pandriana rehefa renoka iny Ratrema, na koa indraindray any amin'ny douche mandritra ny fotoana handroany samy irery iny.
Rehefa mandinika ny zavatra iainany izy anefa dia toa tsy mandry ny saina mandinika hoe efa ho enimbolana izy mivady no tsy niray ara-nofo intsony. Tsy te-hiresaka amin-dRatrema mivantana ny momba izany anefa izy sao dia fohazin-dRatrema eo ilay resaka silipo tany amin’ny hopitaly, ka dia naleony navela tamin'izao. Tsy foiny hariana anefa ilay silipon'i Hery fa nafeniny tany amin’ny toerana tsy misy mpahita, sao misy ilàny azy hono any aoriana. Nivalona ho azy taorian'ilay firaisana tany amin'ny hopitaly moa iny resaka iny, ary dia tsy nisy tohiny intsony; ka na dia ny fifonana aza tsy nataon’i Malala akory.
Indray alatsinainy maraina, nandeha niantsena Malala sady nitondra an’i Cynthia.
Nentin’ny mpamily tamin’ny fiara izy ireo niaraka tamin’ny mpanampy iray, ka nandalo teo akaikin’ny toeram-piasana vaovaon-dRatrema.
- "Andao tsika ry Cynthia hamangy an’i Dada fa efa mandalo eto ihany, ho faly ery izao ny dadan-dry mahita an-dry mamangy azy any am-piasàny; dia amin’izay koa faly ery ireo mpiara-miasa aminy mahita an-dry a! sady nosafosafoiny kely ny takolak’ity menaky ny ainy.
Najanon’ny mpamily teo amin’ny parking ny fiara. Nivoaka Malala nitrotro an’i Cynthia. Naterin’ilay mpamily teo amin’ny ascenseur izy mianaka. Nolazainy fa ao amin’ny rihana faha-efatra no mijanona, ka vao misokatra ny ascenseur dia misoratra eo ny fampahafantarana ny orinasa. Orinasa matanjaka moa no tantanan-dRatrema, ka nahay nanararoatra ny fisokafan’ilay trano fitaratra lehibe mijoalajoala eny Ankorondrano nametrahana ny biraony.
Dia lasa niakatra Malala mianaka. Tsy nananosarotra azy tokoa fa vetivety dia hitany ny misy ny biraon'ny vadiny.
Fa nanao inona tokoa moa Ratrema tamin’izay fotoana izay?
Vehivavy eo amin’ny 36 taona eo ho eo, bikàna sady tsara tarehy no ao amin’ny biraony. Vehivavy mpanara-damaody, ireny manaitra ny mason'ny mpitazana ireny. Eo ambony latabatra izy no mipetraka, ny zipony miforiporitra tafakatra eny amin’ny maojany, ny atin’akanjony efa tafalan-dRatrema hatry ny ela. Akanjo ambony mangamanga no nanaovany ary efa vovahan'i Ratrema avokoa ny bokotra rehetra teny aminy. Maka fihiny ery izy roa migoka ny fahasambarana eo ambony birao. Miverimberina avokoa izao teny rehetra manambitamby izao. Mihozongozona ny latabatra nisy azy ireo; tsy nahatàna intsony ilay ramatoa ka nanala tampoka ny tanany avy any aoriana hamonjy ny hatok’i Ratrema, hanoroka azy. Voasaringotra anefa ny tadin'ilay téléphone ka niala tamin’ny toerany. Tsy nahoan'izy roa anefa izany fa izay naharepotra azy ihany no notohizany.
Nanatona ny sekreteran-dRatrema Malala mianaka:
- "Manao ahoana ianao Mme Malalatiana? Ity ve ilay zanak’i Ramose Tale?" hoy ilay sekretera sady nitsangana izy; "andray, mahafatifaty kely izy izany!"
- "Afaka mahita ny vadiko ve aho ry Mme Sahondra, mahafinaritra be kosa kay ato amin’ity toeram-piasanareo ity ; hafa ihany ny trano vaovao e?"
- "Iee! tena mahafinaritra tokoa ato, tonga soa ato aminay ary ianao Mme Malalatiana! Andraso fa tonga dia antsoiko amin’ny téléphone izy fa misy cliente-nay mantsy miresaka aminy ao amin’ny biraony ao. Sa tonga dia omeko anao mivantana izy, tsy aleo ve manao surprise kely e! Matetika firesany mantsy io zanany vavy kely io ka ho faly ery izy izao mandre fa ato izy sy ny reniny, Cynthia moa ny anarany teo?"
Tonga dia nomen’i Mme Sahondra an’i Malalatiana ilay combiné dia notsindriany ny bokotra mandefa ny antso ao amin’ny biraon-dRatrema!
Vao naneno nefa ilay izy, tonga dia tafiditra, ary ren’i Malala avokoa ny tabatabam-pitiavana nifanaovan-dRatrema tamin’ilay ramatoa.
Efa niova tokoa ny hairaha, fa hay moa ity téléphone ao amin’ny birao ity efa voabaiko, ka raha toa vao miala ny combiné dia mandray izay antso, tsy misy bokotra tsindriana intsony, eny fa na dia ny vao miditra aza…
Ren’i Malala avokoa ny zava-nitranga tao amin’ny birao, nikentrona izy, nisaina kely vetivety monja. Natolony an’ilay sekretera ny téléphone, nankeny amin’ilay varavaram-be misy soratra hoe: DIRECTEUR GENERAL izy; ny zazakely amin’io eny an-tanany ihany.